porn ပြmsနာများ - ဤတွင်အမျိုးသမီးများလာပါ။ (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာအွန်လိုင်းဆွီဒင် သတင်းမဂ္ဂဇင်းမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည် အမျိုးသမီးများသည်“ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသော” ဗားရှင်းကိုသတိပြုမိကြသည် (သတင်းပေးပို့ထားပြီးဖြစ်သည်) ဆွီဒင်ယောက်ျား နှင့် တခြားနေရာ) ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောပါတယ်,
“ လိင်ကိစ္စကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာငါသိချင်ခဲ့တယ်။ ... ပုံစံကိုကျွန်တော်ကျိန်းသေတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါလက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် porn များအတွက်အခြေချဘယ်မှာစင်မြင့်သို့ရောက်ရှိလာတယ်။ ... ငါဆုလဒ်စနစ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပင်ဒီစဉ်းစားဖူးဘူး။ ထို့အပြင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုသိသာထင်ရှားသည့်ဆုလာဘ်တစ်ခုပင်! ငါထင်တာကအစားအစာထက်ပိုတယ်။
“ [ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း] သည်သူ့ဟာသူအားကောင်းစေရုံသာမကရုတ်တရက်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးထူထောင်လိုလျှင်အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၄/၁၅ နှစ်မှစ၍ porn ကိုကြည့်ခဲ့ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအိပ်ရာမဝင်ခင်ညတိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်ရင်ငါတကယ်အိပ်လို့မရဘူး။ ဒါ့အပြင်ငါဟာတစ်စုံတစ် ဦး ထံမှအော်ဂဇင်မရှိခဲ့ဘူး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာဘယ်တော့မှမကြာတာ ၄ ရက်ထက်မက၊ ဘယ်တော့မှမရပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ရပ်ချင်တယ်။ ငါလုပ်ပြီးတိုင်းငါအရမ်းပင်ပန်းနေပြီးအိပ်ချင်နေတယ်။ ဒီဟာ shitty ပါ။ ငါဘယ်ကစ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ် ..
ဒါ့အပြင်ငါကလိင်ကြင်ဖော်ဖက်မရှိဘူး၊ ပုံမှန်ချိန်းတွေ့ခြင်းဘ ၀ ရှိတယ်၊ ငါကအချိန်ကောင်းတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာငါကိုယ်တိုင်လောက်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ငါကြည့်တာနဲ့မတူဘူး။ ငါသူတို့ကိုပျော်မွေ့ချင်တယ် , နှင့်ငါညစ်ညမ်းစွဲကြောင့်ငါမနိုင်ထင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲလို့မေးလေ့ရှိတယ် ရံဖန်ရံခါဘလော့ဂ် အမျိုးသမီးများ၏ပြpornနာများအကြောင်း။ အဖြေ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်းကိုအမျိုးသားများတင်နေသူမှာအမျိုးသားများဖြစ်သည်။ သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွီဒင်ဆောင်းပါး၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာတူးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် Reddit / NoFap(အများအားဖြင့်ငယ်ရွယ်သော) လူငယ်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစွန့်လွှတ်ရန်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အကျွမ်းတဝင်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင် ၆၀,၀၀၀ ကျော်ထဲက ၇၀၀ ကျော်သည်လူသိရှင်ကြားအမျိုးသမီးများဟုချစ်ခင်ကြင်နာစွာခေါ်ဝေါ်ကြပြီး“ femstronauts” ။
ကျနော်တို့ check လုပ်ထား 540 အမျိုးသမီး username များ၏သာလေးပုံတပုံအကြောင်းကို posted ခဲ့သည်။ သူတို့၏အမျိုးအ, 93% တစ်ခုမလိုချင်တဲ့အပြုအမူ (များသောအားဖြင့်ညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံလည်းခဲ့ကြသည် အလွန်အကျွံလိင်-ကစားစရာအသုံးပြုမှု/ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း။ ၇ ရာခိုင်နှုန်းကသာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်တောင်းခံခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများနှင့်လိင်တူချစ်သူနှစ် ဦး စလုံးတွင်နမူနာရှိသော်လည်းပိုစတာအများစုသည်အမျိုးသားများနှင့်လိင်မှုကိစ္စအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာအမျိုးသားတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုဘယ်လောက်နီးကပ်စွာရောင်ပြန်ဟပ်သလဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့အံ့အားသင့်မိပါတယ် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း-related လက္ခဏာတွေ။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ အမျိုးသမီးများသည်လည်းစစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ မလိုလားအပ်သောညစ်ညမ်းသောလိင်အမျိုးအစားများကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခြင်း၊ လျစ်လျူရှုမှု၊ စွဲလမ်းမှု၊ လူအတော်များများသည်သူတို့ထွက်သွားသည့်အခါသိသာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့ရသည်။
ဤသည်မှာအမျိုးသမီးများအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်အသွင်သဏ္lookာန်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အမျိုးသမီးအသံများပါ ၀ င်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရှည်လျားသောပို့စ်ကိုအောက်ပါအပိုင်းများခွဲခွဲလိုက်သည်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးသည်တူညီသောရောဂါလက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်နေရခြင်းကယနေ့ porn ၏ပြwithနာသည်ယနေ့ခေတ်အမြန်နှုန်းမြင့်မားသောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်အလွန်ပြင်းထန်သောအကြောင်းအရာများထက်လူ့ ဦး နှောက်၏အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် femstronauts ၏အကြောင်းပြချက်များနမူနာတစ်ခု။
မိတ်ဖက်များအတွက်လိင်အင်္ဂါ sensitivity ကို / အလိုဆန္ဒ၏အရှုံး
Fiona: ငါမကြာခဏ masturbating ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာညစ်ညမ်း (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ကိုအလွန်ငါ့ကို desensitizing ဖြစ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ကြောင်းစိုးရိမ်နေကြသည်။
Toryဖြေ - ကျွန်ုပ်သည်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှိသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါကရက်အနည်းငယ်တိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်။ orgasm ကိုအလွယ်တကူမြန်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ငါ porn ကိုစသုံးတယ်။ သို့သော်၊ ယင်းသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်နှင့်နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းမှုသည်တူညီသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုရရှိရန် ပို၍ အစွန်းရောက် / ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်လာသည်။ ငါ့ရည်းစားနဲ့လည်းအထွတ်အထိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်သင့်ကိုမထိခိုက်စေကြောင်းအမှန်အတိုင်းပြောနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုမပါဘဲသင်အော်ဂဇင်မဖြစ်နိုင်ပါကစွန့်လွှတ်ရန်ခက်ခဲသည်။
Sienna: ငါသူ့ကိုနှင့်အတူမည်သည့်မီးစများ၌၎င်းခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမကြာသေးမီကငါ့ရည်းစားအတူတက်ခြိုးဖဲ့၏။ ကိုယ်ကပဲမှားကောင်လေးခဲ့ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည်နှင့်စစ်မှန်သောဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းငါ၏အစဉ်အမြဲပြုရသောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေငါမဟုတ်ရင်ခံစားမယ်လို့ဉျြးဖဉျြးခံစားမှငါ့ကိုစောင့်ဘဲထင်ပါတယ်။ ငါ Pre-ဆယ်ကျော်သက်ခဲ့အစဉ်အဆက်ကတည်းကငါနှင့်အတူသို့မဟုတ်နေ့စဉ်တော်တော်များများ porn စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲ masturbated ပါပြီ။
ကယ်လီမိန်းကလေးတွေအတွက်တော့အလယ်အလတ်တန်းစား ED ကိုရှာဖို့ခက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါယောက်ျားတွေကိုဖတ်တာနဲ့တူသလိုပဲ။ အလိုဆန္ဒရှိပေမယ့်အဘယ်သူမျှမနှိုးဆော်ခြင်းရှိပါသည်။ အစာအိမ်နှင့်အောက်ပိုင်းဝမ်းဗိုက်တို့တွင်တုန်ခါခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ လွှမ်းမိုးခြင်း၊ နှင့် BTW ငါ do စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အနိမ့်နေစဉ် orgasming သည်အော်ဂဇင်၏အရည်အသွေးအတော်လေးသာမန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ: ကပိုပြီးတိကျစွာစာတိုက်အဖြစ်ဖော်ပြစေခြင်းငှါ မှလွဲ. PE ရှိသည်။ ထိုသို့သောတစ်အော်ဂဇင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တင်းမာမှုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ မှလွဲ. မကြာခဏကြေညာဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်လိင်အင်္ဂါအတွင်းဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီ။
Surya: ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးညတွင်အိပ်ပျော်ရန်နှင့်တခါတရံတစ်နေ့တာတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။ ငါရည်းစားကိုတစ်ပတ်အကြိမ်အနည်းငယ်တွေ့တယ် သူထွက်သွားတော့သူ့ကိုအရမ်းလွမ်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့အတူတူရှိနေရင်၊ ကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ကပျောက်သွားသလိုပဲ။
Ellen: ကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့ကျွန်မစမ်းသပ်မှုမစခင်အထိကျွန်မမှာပြသနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ငါခံစားချက်ကိုကြိုက်တယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုချတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တာမျိုး၊ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည်တုန်ခါသူနှင့်ငါ့လက်ကိုအလွန်ကျွမ်းကျင်နေပြီးငါ့ရည်းစားကကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သက်သောအခါအော်ဂဇင်သို့မဟုတ်အလွန်အထိခိုက်မခံဟုခံစားရသည်။ F * ck ။ ဒါက Sh * t ။
Valerieဖြေ - အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲညစ်ညမ်းရုပ်ကိုမှီခိုနေရခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။
lilone_mg: ကျွန်တော်က ၁၉ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးပါ ကောလိပ်ကျောင်းသား၊ ရည်းစားစသည်ဖြင့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အစမှာဒီပုဒ်မကိုနောက်ပြောင်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် pmo အရမ်းကြီးနေရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါတကယ်နားမလည်ခဲ့ဘူးလား။ ဒါကြောင့်များစွာသောသူတို့လိုငါ pmo-ing ငါငယ်ငယ်တုန်းကစတင်ခဲ့သည်။ Nbd ငါသိပ်မကြာခဏလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှမဆိုဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုကိုမြင်ဘူး။ ထိုအခါငါကောလိပ်အတွက်အခန်းတစ်ခန်းရတယ်။ ငါငြီးငွေ့နေသောကြောင့်စာသား pmo လိမ့်မယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်မဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုရည်းစားနဲ့အတူ ၄ နှစ်သမီးကိုသတိပြုမိလာတယ်။ ကျနော်တို့ထပ်တူပြုခြင်းထဲကကျဆင်းသွားကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမပျော်ခဲ့ကြဘူး။ ငါတို့ပြောခဲ့တယ်၊
ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီ (တစ်ခါတစ်ရံ) pmo ရှိခဲ့ကြောင်း၊ နှစ် ဦး စလုံးကျွန်ုပ်အဆင်သင့်ဖြစ်မည်၊ ငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုမတွေ့တော့ဘူးလို့တောင်ပြောခဲ့တယ် ဒါဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်လား ?? ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာရေရှည်အတွက်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါသူ့ကိုချစ်တယ်။ သူနဲ့အတူရှိနေတာငါလိုချင်တာပဲ။ ဒါကြောင့်အဲဒီညမှာပဲငါ pmo တစ်ပတ်လောက်ရပ်လိုက်တယ်။ အဲ့တာမှပဲငါပိုပြီးတုန့်ပြန်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဂရုတစိုက်ရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါကတည်းကပြန်သွားပြီ, ဒါပေမယ့်ငါ pmo ကနေအပေါ်ကိုရွှေ့ချင်တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေး၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စည်းကမ်းကိုထိခိုက်သည်။ ငါပိုကောင်းတဲ့ရည်းစားဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီညမှစတာငါကဒီဖြစ်တည်မှုကိုပြောနေတာပဲ။
ဆိုဖီဖြေ - အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အတော်လေးမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ အချိန်ကျတာမရှိဘူး။ ကျောင်းမှ“ နေမကောင်းသောနေ့ရက်များ” အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောအရက်များကိုအကြိမ်ပေါင်း ၃၀ နှင့်အထက်အကြိမ် ၃၀ ကျော်တက်ခဲ့ဖူးသည်။ အခုတော့ငါလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်တကယ့်ကိုယုတ်ညံ့တဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ယောင်ရန်ရပ်တန့်ချင်တယ်။ ဒါဟာငါကအခြေအနေ၏ရငျးနှီးရာမှငါ့ကို detach ။
Alana: ငါ 10 ၏အသက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်း၌ငါ၏အကျိုးစီးပွား [အသက်အရွယ် 13 သည်အထိ] ပျော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနေ့တိုင်း edging နှင့် orgasming လာမည့်4နှစ်ကြာမယ်လို့နှင့်မကောင်းတဲ့ရက်, ငါသည်တစ်နေ့ထဲမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုပါလိမ့်မယ်။ ထိုနောက်မှငါသည်ကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားရမယ်လို့; ဒါကြောင့်မြင့်မားပြီးနောက်အတိအကျတစ်ဦးလေယာဉ်ပျက်ကျမှုနဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ ငါအထီးကျန်ခံစားရတယ်ဝမ်းနည်းနှင့် ပို. ပင်စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်း FAP အတူ။ Self-သနားတစ်ခုလွှမ်းမိုးသောအသိငါ့ကိုကျော်ကိုလျှော်မယ်။ ငါသည်ငါ့မိဘများ၏ထင်, သူတို့၏သမီး, သူမ၏အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူပုန်းအောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းကုလားကာရေးဆွဲမရှိအဆုံး masturbating ဒါကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းခံစားရလိမ့်မယ်။ ကြှနျတေျာ့စိတျကိုဖြည့်ဖို့ Pseudo-လိင်, မမှန်သောအပျြောအပါးသာ။
Lizဖြေ - ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး မှားသော တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအရာတစ်ခုခုအပေါ်အလွန်မှီခိုနေရခြင်းသည်ဖျားနာခြင်းမဟုတ်ပါ။ သငျသညျစတင်တခါနှင့်အဘယ်သို့, သင်အမှန်တကယ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြည့်တင်းရန်ကန့်သတ်နိုင်မလဲ? နှင့် [porn '] တောင်မှအစစ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ Ugh!
tinaဖြေ - မကြာသေးခင်ကတစ်နေ့ကို ၆, ၇ ကြိမ်လောက်ကျွန်တော်ထွက်လာပြီ။ ဒါဟာငါ့အချိန်ကိုကြာကြာငါ့ကိုနောက်ကျစေသည်။ ငါမနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမျိုးကိုတစ် ဦး စွဲလမ်းကြောင်းခံစားမိကူညီနိုင်ဘူး။ porn ငါ့ကိုရွံရှာပေမယ့်မကြာသေးမီကငါငါ့ပိုကောင်းတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ဆန့်ကျင်, အမြန်ပြင်ဆင်ချက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုကြိုက်ပေမယ့်စိန်ခေါ်ချက်ကိုယူပြီးဒီအတိုင်းလုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ခံစားရတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုအဖြစ်ရငျးနှီး / မြင်လျှင်အခြားသူများရဲ့အရှုံး
Elise: ငါသည်လည်းချစ်သူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါငါအလွန်အမင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုစဉ်းစားမိသောကြောင့်အာရုံထွေပြားခြင်းဖြစ်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့လိင်ဘဝမှာဒီကြီးမားတဲ့အတားအဆီးပဲဖြစ်ပါတယ်
အမဲန်ဒါဖြေ။ ။ ဝေးလံတဲ့ဝေးကွာလှတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးပေါ့ ငါနေ့တိုင်းနီးပါးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ။ ... ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ငါ၏အအထီးသူငယ်ချင်းကန့်ကွက်ရှာတွေ့; ငါအလုပ်အတွက်ဖြုန်းသင့်ပါတယ်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်အများကြီးဆုံးရှုံး။ ငါသည်လည်းအမျိုးသမီးငယ်များ (ကောလိပ်မှတစ်ဝက်မတိုင်မီအထိမရောက်နိုင်လောက်အောင်) လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်ကိုမတွေ့မီငါငယ်ငယ်တုန်းကပရောပရည်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးတဲ့နောက်ယောက်ျားတွေနဲ့ရင်းနှီးဖို့၊
Lillyဖြေ - တစ်ပတ်ကို ၄ ကြိမ်ကနေ ၆ ကြိမ်လောက်ငါတစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်။ အခြားတစ်ယောက်မှမည်သည့်စွမ်းအင်ကိုမျှပြန်မသိမ်းဆည်းနိုင်ပါ။ ငါ porn ကြည့်တာကိုကြိုက်ပြီးသူနဲ့တကယ်အချိန်ဖြုန်းဖို့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာပိုနှစ်သက်လာတယ်။ ငါမုန်းသောအရာဖြစ်လာသည်
Kat: ကျွန်ုပ်သည်ရိုးရိုးဘာသာဖြစ်သည် နောက်တခါငါအလေ့အကျင့်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူငယ်ချင်းအသစ်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါ၊ တစ်ခြားစီပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲပုံမှန်လုပ်လုပ်ငါဟာငါသရုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထင်တယ်၊ သူတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာသူသိနေတဲ့ခံစားချက်ကိုမလှုပ်မယှက်နိုင်ဘူး။ ဒါကငါလုံးဝမရှိသော [တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း] စိန်ခေါ်မှုကိုငါစတငျရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲ။ ငါစိတ်ကူးယဉ်အာရုံစိုက်လွန်းသောကြောင့်အဖြစ်မှန်ကိုနားမလည်နိုင်တော့တာကိုငါငြီးငွေ့နေသည်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက် porn မှမလိုချင်တဲ့တင်းမာမှုလျှော့ချ
နီနာဖြေ - ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးအမှန်တရားကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံလွဲသွားစေတယ်။ အဆိုးဆုံးအပိုင်းကတော့ငါကြည့်လိုက်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။
အဘိဓါန် Shonaဖြေ - အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နေသမျှကာလပတ်လုံးငါပုံမှန်ကြည့်နေတယ်။ ... ငါအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးငါကြည့်နေသောအရာများသည် ပို၍ ပင်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်။ ငါမကြာသေးမီကညစ်ညမ်းသောမုဒိမ်းကျင့်မှုကိုအဓိကပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ချယ်လ်ဆီးဖြေ - ငါအော်ဂဇင်တစ်ခုရဲ့အလှတရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်ကတစ်နှစ်ပဲ။ သို့သော်လည်းငါသည်အထွက်ရှိထွက် nastiest နှင့်မညီကြောင်းအများဆုံးညစ်ညမ်းမှုအချို့ကိုငါ့ဝေစုမြင်ကြပြီ။ ပြီးတော့ငါနုပျိုနေသေးတယ်လို့ထင်ဖို့။ ငါနောက်တဖန်ငါ့ကိုဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ခက်ခဲပါတယ်
စွဲလမ်း (အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း) သို့ချော်
Jenနေ့တိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လိုတယ်။ ငါနေမကောင်းဖြစ်ပြီးငြီးငွေ့နေတယ် ငါအဲဒီမှာနာကျင်နေပါတယ် ... ကနာကျင်။ ပြီးတော့ကျွန်မစိတ်ကနိုးနေချိန်ဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်နေချိန်မှာလိင်စိတ်ကူးယဉ်ပုံတွေကိုဆက်မကစားနိုင်တော့ဘူး။ ... ငါပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်မိန်းကလေးများ (စပီကာသည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်သူ) ကိုဆွဲဆောင်ခံရခြင်းနှင့်သူတို့၏လှပမှုကိုလေးစားခြင်းခံရခြင်းကိုသတိရသည်။ အားလုံးသွားပြီ ငါအခုလိင်တူဆက်ဆံသူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ ငါ့ရဲ့လိင်အစွဲစွဲလမ်းစကတည်းကလိင်ကိစ္စကိုငါမစွဲလမ်းဘူး။
သူ Alicia: ဒီညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကကျွန်တော့်ဘဝကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ယောက်ျားတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူဖို့အမြဲတမ်းဘာပြproblemနာမှမရှိဘူး၊ ငါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကျန်းမာသန်စွမ်းတယ်။ ငါသိသောလူအများစုထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ၅ မိနစ်ကနေတစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာပစ္စည်းဟောင်းတွေနဲ့ငြီးငွေ့နေလို့ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းကပျော့ပျောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ငါစခဲ့ပြီးအဲဒါဟာငါရှာတွေ့နိုင်သမျှအများဆုံးမညီမညာဖြစ်နေသောအရာများဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော့် PC မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွေရှိတယ်၊ ဖိုင်တွေကိုဖုန်းနဲ့ mp3 / video player တွေမှာထားတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ကိုအများကြီးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။
အရာအားလုံးငါ့အဘို့ rougher ခဲ့ကြရသည်။ ငါခွေးနှင့်ပြည်တန်ဆာလို့ခေါ်ချင်တယ်။ ရိုက်နှက်ခံရဖို့တောင်းခဲ့တယ်၊ ယောက်ျားအများစုကမလုပ်နိုင်ကြဘူး။ လိင်သည်ကျွန်ုပ်အားချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သော်လည်းအရာအားလုံးဖြစ်သော်လည်း ကျွန်မရဲ့လိင်မှုဘ ၀ မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာအားလုံးဟာကင်မရာနဲ့လခလောက်ပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးရိုးဘာသာလို့သတ်မှတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ဘူး အခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်ကွက်ရုံတင်မကဘူး၊ ကျွန်တော့်ဘဝမှာအမျိုးသမီးတွေကိုပါကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ အခြားသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဆင်ပြေသည်ဟုခံစားရသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်အရာကမျှမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ။ ငါဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်တယ်၊ အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အော်ဂဇင်တုတွေကိုငါအတုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာမှားတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ငါတစ်ယောက်တည်းနေချင်ခဲ့တယ်။ porn နဲ့လား ငါမှာအပြင်းထန်ဆုံးအော်ဂဇင်ရှိတယ်၊ အဲ့ဒါကိုတစ်နေ့ကနေငါးကြိမ်လောက်လုပ်တယ်။
လိင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ဆက်ဆံရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေမှုသည်အလွန်ထင်ရှားသည်။ ဒါ့အပြင်သူကကျွန်တော့်ကိုယောက်ျားတွေနဲ့အတူပရောပရည်လိုချင်တာကိုအများကြီးလျော့နည်းစေခဲ့တယ်။ ဒီချစ်စရာကောင်လေးကိုငါဘာကြောင့်စကားပြောဖို့လိုတာလဲ။ သူကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်ခံစားရသောခံစားမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုသူဘယ်တော့မျှပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ” ငါအွန်လိုင်းမှယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်စကားစမြည်ပြောနေတာပဲ၊ ထပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတွက် PC ကနေလမ်းလျှောက်ထွက်သွားတယ်။ ငါအလျင်အမြန် porn session တစ်ခုရရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါအတန်းသို့မဟုတ်အလုပ်နောက်ကျလိမ့်မယ်။ ငါသနားစရာကြီးနှင့်ငါကပြောင်းလဲချင်တယ်။ (အောက်တွင် Alicia ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနောက်ဆုံးသတင်းကိုကြည့်ပါ။ )
Megan: အဲဒါဟာတရားဝင်စွဲလမ်းမှုလို့ထင်ပါတယ်။ ... နှင့်ကျိန်းသေတ ဦး တည်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်ရှိပါတယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ပါ ၀ င်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ငါလုပ်ခဲ့တုန်းကငါ (အိမ်ကနေ) အလုပ်လုပ်မယ့်အစား porn ကိုတစ်နေ့လုံးကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအပြင်, ငါဟာတကယ့်ဘဝမှာတကယ်အန္တရာယ်ကင်းပြီးမဆင်မခြင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါလိင်အများစုကလွဲပြီးဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်သည်လုံးဝဆတ်သွားပြီးကျွန်ုပ်စိတ်နှင့်အာရုံတို့သည်စိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ သိသာထင်ရှားသည့်အရာအားလုံးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ခက်ခဲသည်။ အဆိုပါ "နှောင့်နှေး" ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။
ED ဗားရှင်းအမျိုးသမီးအတွက်မူကျွန်ုပ်သည် clitoral stimulation နှင့်အတူထိုပြwithနာမျိုးကိုသေချာပေါက်ကြုံခဲ့ရသည်။ ငါယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူနေနိုင်ဖို့အတွက်ငါတောင်မှအလုပ်မလုပ်နိုင်ဖို့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ sensitivity ကိုသူ့ဟာသူမရှိ, ဒါမှမဟုတ်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုသကဲ့သို့ငါခံစားခဲ့ရသည့်လမ်းကိုရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်ရနိုင်ပေမယ့်ကအားလုံးကိုလျှင်, တစ် ဦး မိတ်ဖက်နှင့်အတူအများကြီးပိုကြာလိမ့်မယ်။ ညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပြaနာမရှိသောအလွန်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ငါတွေ့တဲ့အခါ [ကျွန်တော့်အလေ့အထ] ဆိုးဝါးခဲ့တယ်။ သူသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလန်းလန်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်နှက်နေသောလိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တွင်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ဒီဟာကယောက်ျားတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာလည်းဖြစ်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုသာမကအိပ်ရာပေါ်၌အပြုအမူကိုပါနှိုင်းယှဉ်ရုံတင်မကသူတို့၏အမျိုးသမီးသည်သူတို့၏အနှစ်သက်ဆုံးညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်ကဲ့သို့ပြုမူခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသူတို့သတိပြုမိသောအခါ၎င်းတို့သည်မျှော်လင့်ထားသည့်ခြားနားချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
Whitneyဖြေ - ကျွန်တော် ၈ နှစ်သားကတည်းကကိုယ်ခန္ဓာကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့တယ်။ ငါ porn ကိုစတင်ကြည့်ရှု ~ 8 နှစ်ရှိ ငါအလိုရှိတိုင်းကွန်ပျူတာကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အော်ဂဇင်ကိုရောက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါက9နှစ်ကြာမှီဝဲပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်အချိန်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်သည့်အရာ၊ ငါခဏပဲနေရင်တောင်ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတော်လေးကောင်းတယ် မာရသွန်ပြေးတာကိုနာရီပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာ၊ ငါအော်ဂဇင်ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိနေတယ်။ ငါစွဲလမ်းနေတာကိုတော့ငါမသိခဲ့ဘူး၊ ငါပျော်ရွှင်မှုခံစားခဲ့ရပုံ၊ ဘဝနဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုငါမမြင်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတကယ့်ဆက်ဆံရေးမှာ၊ ငါရည်းစားနဲ့အော်ဂဇင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။ ခံစားမိမှာပါ။ သူကကျွန်တော့်နည်းစနစ်ကိုပုံတူပွားလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရဘူး၊ ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ငါတောင်မှမကြိုးစားဘူးသောအချက်တယ်; ဒါကြောင့်သူ့ကို ဦး ခေါင်းပေး။ ငါ့အဆုံးအပေါ်မည်သည့်အပျော်အပါးစွန့်လွှတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ ငါသူ့ကိုသဘောကျတာသိတာလုံလောက်ပြီ။ သူခဏလောက်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုမရခဲ့လို့စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်။ သူလည်းငါနှင့်အတူစိတ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်။ သူကနားမလည်နိုင်ဘူး၊ သူ့ကိုရှင်းပြဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိုးနှက်ခဲ့တယ်။ ငါချစ်သောသူသည်ငါ့အလိုသို့ လိုက်၍ တစုံတခုကိုမျှငါမပြုနိုင်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူကကျွန်တော့်ကိုပျော်ရွှင်မှုပေးဖို့တောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ငါမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးမှမှီဝဲ။ ကျွန်တော်ဟာစကားပြောခန်းတွေကိုလှည့်စားပြီးကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကိုလုပ်ခွင့်ပေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုရေးတတ်တဲ့လူတွေကိုရှာခဲ့တယ်။ ဒါဟာတော်တော်သူကပြောတယ်မှောင်မိုက်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ (အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်) စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ပြီးကျောင်းမှအမြဲပြန်လာပြီးညနေခင်းကိုလက်တော့ပ်ရှေ့တွင်ဖြုန်းတီးရင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးအချိန်ကုန်ခံပြီးအချိန်ကုန်ခံပြီးအချိန်ကုန်ခံပြီးချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ချိတ်ဆက်မှုနောက်ဆက်တွဲ။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်အိပ်မက်များကိုရိုးရိုးသားသားနှင့်တွေ့ခဲ့သည်။ ငါသူနဲ့အတူအော်ဂဇင်မျှော်လင့်ထားသည့်အခြေအနေမျိုး၌ထားရန်ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။ ငါအရင်ကတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့စိတ်ပျက်စရာပုံစံကိုမမြင်ချင်ဘူး၊ ဒါကိုမခံရချင်ဘူး ငါကိုယ်တိုင်တစ်ခါတစ်ရံမှာမဖြစ်နိုင်အောင်အော်ဂဇင်ပြုရန်အလွန်ခဲယဉ်းကြောင်းမည်သို့ရှင်းပြနိုင်မည်နည်း။ သူ့ကိုငါမျက်စိထဲဘယ်လိုမြင်ပြီးအခြေခံအားဖြင့်“ မင်းဟာမင်းမဟုတ်ဘူး၊ ငါပဲ” လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။
သူကအရမ်းပွင့်လင်းလက်ခံခဲ့သည် အံ့သြစရာပဲ ငါအားပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုသူဖန်တီးခဲ့တယ်။မဟုတ် ငါစိတ်အေးအေးထားနိုင်တဲ့သူနဲ့သူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲအာရုံစိုက်စရာမလိုတဲ့အရာအားလုံးကိုပျော်မွေ့ဖို့ဖိအားပေးခံရတယ်။ အော်ဂဇင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်မဟုတ်ပါ။ အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ခံစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အတွက်ကမ္ဘာကိုဆိုလိုသည် ထိုသို့ကူမတော်မူပြီ ကျွန်တော့်ရဲ့ hang-ups အနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြွင်းချက်မရှိချုပ်ကိုင်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူမျှတမှုမရှိဘူး။ ၉ နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကငါနဲ့အော်ဂဇင်ပေးဖို့ porn နဲ့ / သို့မဟုတ်ပုံပြင်တွေနဲ့သတ်သတ်မှတ်မှတ်နည်းစနစ်တစ်ခုယူခဲ့တယ်။
ငါ porn မလိုဘဲသူ့အတွက်သူ့မျက်လုံးနဲ့အော်ဂဇင်ကိုကြည့်ချင်တယ် ငါသူနှင့်အတူအပြန်အလှန်တိုင်းပျော်မွေ့ချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သူ့ကိုမျှမတွေ့မြင်မီရေကူးရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရခြင်းမရှိသောစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေလိုသည်။ ငါ့အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်စွဲလမ်းမှုကိုမသုံးဘဲဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ချင်သည်။
မျှော်လင့်ချက်: (နေ့ ၃၆) ဒီအတွေ့အကြုံကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမထားနိုင်တော့ဘူး။ ငါ့မှာနေ့တိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စွမ်းအင်အများကြီးရှိတယ်။ ငါ့မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်။ ငါမဆုံးရှုံးချင်ဘူး
Nikki: ငါပြီးခဲ့သည့်လကစတင်ခဲ့ကတည်းကငါအကြိမ်အနည်းငယ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ကြပေမယ့်ငါတကယ်အကျိုးကျေးဇူးများမြင်ကြပြီ။ ပထမဦးစွာငါ၏အစွမ်းအင်ပယ်နိုင်အောင်မြင့်မားသောပါ! ငါ spliff ရှိလျှင်ပင်ငါ sh * t ကိုပြုမိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်၏မတိုင်မီငါသည်ဤလုံ့လရှိသူဖြစ်ဖူးဘူး!
Kristen: ငါမထွက်ခွာမီနောက်ဆုံးခြောက်လတိုင်အောင်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုငါအများကြီးမကြည့်ခဲ့ဘူး။ ငါတစ်ချိန်ကတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်ကြည့်ရုံဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ခါမျှမကြည့်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့တကယ့်ကိုဖြတ်တောက်ဖို့အကြီးမားဆုံးစေ့ဆော်မှုကငါရက်အနည်းငယ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ငါဘယ်လောက်အထိစွမ်းအင်၊ ငါတိုက်တွန်းမှုခံစားရသောအခါငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲသောမြူခိုးထဲသို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုလုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်မည်မျှ ပို၍ ခံစားရကြောင်းမှတ်မိသေးသည်။
ပိုများသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်
Olivia: ငါအပျိုစင်ဘဝတုန်းကငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်လိင်ဆက်ဆံသောအခါငါလုံးဝမပျော်ခဲ့ပါ။ ဒါဟာထုံနေသလိုခံစားရတယ်၊ ငါကန်းကန်းမှထွက်ဖို့အစီအစဉ်ချထားတယ် ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မစိုက်ဘဲတစ်လလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံတာကိုစတင်ခဲ့ပြီးလုံး ၀ ကိုမမှီခိုခဲ့ဘူး။
Megဖြေ - ကျွန်မရဲ့အဓိကပြissueနာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်စေတဲ့အတွက်ပါးစပ်ကိုပါးစပ်နဲ့ပါးစပ်စတာလင်ပေါင်ပေးရတာကိုအရမ်းစိတ်ထိခိုက်မိတယ်။ နေ့တိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလေ့ရှိတယ်၊ တကယ်လိုချင်ခဲ့တယ် ... တစ်ပတ်လောက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်မရဲ့ SO နဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ဂျူလီ: nofap ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်အမျိုးသားများအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ လိင်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဟုမထင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်မှားသည်။ မိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးသည်အခြားတစ် ဦး အပေါ်သူတို့၏ဆန္ဒအားလုံးကိုချွေတာသောအခါ၊
Cara: fapping သို့မဟုတ် sexing မဖြစ်သည့်အချိန်ကာလလွန်ပြီးနောက် sensitivity ပိုမိုမြင့်မားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပေါက်သတိပြုမိသည်။ တခြားအမျိုးသမီးတွေပါ ၀ င်တာကိုကျွန်တော်ပိုခံစားရတယ်။ အချစ်ကလိင်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ ၎င်းသည်သင်၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုတစ်စုံတစ် ဦး (သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်) နှင့်သက်သာရာရစေသည့်အပြင်ကမ္ဘာကြီးကိုအရည်ပျော်စေသော၊
Sheena: နောက်ဆုံးညဥ့်ကျနော်တို့လိင်ခဲ့ကိုမ fapped သို့မဟုတ် shlicked သို့မဟုတ်သမျှပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်အတွင်းကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ငါ (အိမ်နီးချင်းဘို့မဟုတ်) ကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်ကောင်း, ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်သညျ လာ. ခက်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မဆက်လက်အားပေးအားမြှောက်ပါ၏! ကျွန်မသူအရမ်းမမျှော်လင့်ပါတယ်!
ဗက်: ငါ sensitivity ကိုပြန်လည်ဤလုပ်နေတာနေပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ ငါနှစ်ပတ်အတွင်းကဖန်ဆင်းသောအခါငါပြန်ရောက်သွားတယ်နှင့်မျှသာစက္ကန့်လာ၏။ ငါဒါသည့်အခါငါ့အ SO ကြောင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ငါကပိုပြီးပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်လိင်ရှိသည်။ သူကကျိန်းသေ fapping မယ့်အချိန်ပြီးနောက်ငါ၏အစိတ်အားထက်သန်မှုကိုသတိထားမိတယ်။
Jessieဖြေ - ကျမယောက်ျားကမနှစ်ကကျဆုံးတဲ့အချိန်မှာရပ်လိုက်တယ်။ မနေ့ကငါ၌ငါ့လင်ယောက်ျား၏ထိတွေ့မှုမှသာ“ အို” နှစ်ခုရှိသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၈ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဒီလိုလုပ်နိုင်ခဲ့သူမှာပထမဆုံးဖြစ်ပြီးတစ်ခုတည်းသောလူတစ်ယောက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါခလုတ်ကိုတစ် ဦး တည်းတာဝန်ယူနေတုန်းပဲ။
မခင်မာဖြေ - ငါ့ရဲ့ရည်းစားနဲ့အတူလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒါကပိုကောင်းလာပြီးရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပါ။
Kimberly: (နေ့ ၃၃) ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွင်ဖွယ်အချိန်များကြားတွင်ပိုမိုရှည်လျားသောအားလပ်ချိန်များရရှိသောကြောင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ် ပို၍ ပျော်ရွှင်မှုကိုသတိပြုမိသည်။
စာရာသည်။ ကျွန်တော်ကအသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးပါ။ ငါ nofap လိင်မစခင်ကကျွန်ုပ်သည်ဘာမှမခံစားမိသောကြောင့်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်စောင့်ဆိုင်းရုံမျှမက၊ အခုကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေတာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ၊ သူတို့နဲ့အတူအော်ဂဇင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ကိုတစ်ဖက်ကတွက်လို့ရတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့တစ်ယောက်မှသိပ်တော်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မနေ့ညကလိင်ဆက်ဆံတာဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခံစားခဲ့ရပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာငါဟာအကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါ reboot လုပ်နေတုန်းတောင်မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘာတွေသိမ်းထားလဲဆိုတာကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်, သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ခံစားမှုချိန်ခွင်လျှာ
Caitlynဖြေ - ငါကပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ငါကပိုပျော်တယ်၊ ပိုကောင်းတယ်၊ porn သည်ငါ့အတွက်ချိုင်းထောက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဓိကအခြိနျပိုငျး tool တစ်ခု။
ကယ်ရီ: [နေ့ ၄၁] သူသည်လေးစားမှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်စစ်မှန်မှုရှိသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်နုတ်ထွက်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သူဖြစ်သည်။ ငါအသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ကတည်းကအော်ဂဇင်အကြားအရှည်ဆုံးအချိန်ကုန်သွားတာနဲ့အမျှသူ့ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုပိုရှိလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအဆင့်ဆိုတာတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ကျွန်ုပ်၏နေ့များသည်ကောင်းမွန်လွန်းခြင်းမရှိသည့်အချိန်ကျွန်ုပ်၏တာ ၀ န်ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားချက်ကိုယခု ပို၍ တွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။
Kayla: ငါက ၁၃ နှစ်လောက်လောက်ကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့ပြaနာတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏မိဘများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများတွင်စစ်ထုတ်သည့် အချိန်မှစ၍ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အထိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မပတ်သက်ပါ။ ငါနောက်ဆုံးငါအကြောင်းကိုတစ်နှစ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်စွဲခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြပြီးမကြာသေးမီကသာတစ်လကျော်ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သည်။
ငါအလားအလာရည်းစားအဖြစ်ကိုမြင်လျှင်ခပ်သိမ်းသောကောင်လေးကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ဒါဟာတကယ့်ပြဿနာကကြီးတို့နှင့်ကြီးသောယောက်ျားတွေနှင့်အတူကျန်းမာဆက်ဆံရေးသို့ရတဲ့အထဲကငါ့ကိုစောင့်လေ၏။ ဖြတ်ကတည်းကငါကြီးမြတ်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများအတွက်အလားအလာထက်အလားအလာရည်းစားသို့မဟုတ်လိင်မိတ်ဖက်အဖြစ်ယောက်ျားတွေမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါ၏။ ဤရွေ့ကားကျန်းမာမိတ်ငါ့ကိုထို့နောက်ငါနှစ်များတွင်ပါပြီယောက်ျားတွေန်းကျင်ကပိုသက်သာခံစားရစေပြီ။ ဒါဟာယောက်ျားနှင့်အတူအခန်းတခန်းအတွက်ဖြစ်နှင့်ထိုင်နှင့်မဟုတ်ဘဲကြောင့်အိပ်ရာမှာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုစိတ်ကူးယဉ်ထက်သူတို့နဲ့အတူကော်ဖီခွက်ရှိခြင်းစဉ်းစားရန်ကြီးလှ၏။
Jillianဖြေ - အပျိုစင်လေးပါ။ porn သည်အခြားသူများကိုအထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအားကျွန်ုပ်ရှုမြင်ပုံကိုပုံဖော်ထားသည်။ ငါစွဲလမ်းအတိတ်ကာလတော်တော်လေးဆိုးခဲ့ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ခဏတာမှသာမာန်လူတွေကိုလုံးဝဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး၊ yaoi နှင့် hentai။ (ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၌ဖြစ်သည်။ ) တကယ်တော့လိင်သည်အလွန်တကယ့်ကိုပြင်ပအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုကိုစိတ်ကူးကြည့်ဖို့အခက်တွေ့နေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်တွေ့ရသည့်ယုတ်ညံ့သောအပြုအမူသည်ကျွန်ုပ်ကိုပူပြင်းစေပေမည်။ ငါအမျိုးသမီးများပြသ "တန်ဖိုးမရှိမရှိခြင်း" တွေအများကြီး internalized ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက် - ငါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာကြောင့်ငါ့ကိုစွန့်ခွာရန်လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရသည် - ငါဘယ်လောက်စိတ်ဓာတ်ကျသည်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရန်ငါစိတ်စွဲမှတ်သွားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်များမည်မျှပိုကောင်းပါသနည်း။ ငါကလူတွေကိုလူတွေလိုမြင်တာပိုကောင်းလာတယ်။ စိတ်ကမြောင်းထဲမလာတော့ဘူး။ ပြီးတော့လူနေမှုအဆင့်အတန်းအားလုံးမှာအရူးအမူးစွဲလမ်းမှုနည်းတယ်။ ငါပင်စွမ်းအင်ကိုပိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံးအေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်၊ ငါလေ့ကျင့်ခန်းဟာ outlet တစ်ခုအနေနဲ့အလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပေမယ့် porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာထွက်ပေါက်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူး။
တိုးမြှင့် Self-စည်းကမ်း, ထိရောက်မှု
Mora: (နေ့ ၃၅) ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာတ်မကျ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပြီးစိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အဆက်မပြတ်ထွက်နေသည်။ ငါနေ့တိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တခါတရံအိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်း။ နာရီများစွာကြာအောင်လုပ်လေ့ရှိသည်။ ငါလုပ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရာရာတိုင်းကမလှုပ်မရှားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ငါကဒီသွားလာရင်းပေး၏။ ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ကကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ ၁၁ ကီလိုမီတာရှည်တဲ့စက်ဘီးစီးပြီးသွားရမယ့်အရာတွေကိုစာရင်းပြုစုခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ၃၅ ရက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အေးမြသောအရာများ - ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ် အခြေခံ၍ အလုပ်နှစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် - အလုပ်မှာအနိုင်ကျင့်ခြင်းမရှိတော့ - အမြတ်အစွန်းအတွက်မဟုတ်ဘဲဒေါ်လာ ၄၀၀၀ တိုးမြှင့်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်နှင့်ပတ်သက်သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပိုမိုတာ ၀ န်ယူခြင်း၊ ပိုမိုလေးစားခြင်း - မဖြေရှင်းနိုင်သောမိသားစုပြသနာများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိခင်ဖြစ်သူသည်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုသည် ၂ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အတူတကွနေထိုင်နိုင်ရန်တိုင်းပြည်တစ်လွှားအဖေအားပျံသန်းခဲ့သည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကအခုကျွန်တော့်ကိုဖွင့်ဖို့အများကြီးမလိုပါဘူး။ ငါသာမန်အားဖြင့်သက်ရောက်မှုများများစားစားမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ကြည့်ရတာရူးနေတာပဲ။ နောက်လူတစ်ယောက်နှင့်အတူရှိနေစဉ် nofap ကကျွန်ုပ်ကိုအော်ဂဇင်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ကြီးမားသောမစ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်“ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ရင်ပိုပြီးလွယ်ကူလာလိမ့်မည်” ဟူသောသဘောထားမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
နယ်ပယ်တစ်ခု၌ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းသည်အခြားဘဝကဏ္inများတွင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဒါ့အပြင်ဖိစီးမှုနဲ့နာကျင်မှုကနေငါမသုံးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒီစွမ်းအင်အားလုံးကိုအသုံးပြုဖို့လိုတယ်။ ငါအဆင့်မှာပိုဆိုးခံစားမိခဲ့ပေမယ့်ငါကပတ်ပတ်လည်ရှင်းလင်းပြတ်သားအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မပိုပြီးနာကျင်မှုကိုတိုက်ရိုက်နှင့်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်တူသောဒါဟာလိုက်တယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာရသွန်ပြေးတစ်ဝက်လောက်မှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုရက်သတ္တပတ် ၇ ပတ်။ ငါသည်ဤရှေ့တော်၌အပြေးသမားမဟုတ်ခဲ့! သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ဝေးလံခေါင်သီသောရပ်ကွက်များအနက်တစ်ခုသို့လည်ပတ်ရန်ငွေပေးခဲ့သည်။ လေးပတ်လောက်အရက်မသောက်ရသေးဘူး။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာငါအခြားမြို့မှာရှိတဲ့တီးဝိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း, ဂီတပွဲတော်အခမဲ့ဝင်ခွင့်ရ, ထို့နောက်ငါသူတို့နှင့်အတူလမ်း -tripping အခြားမြို့တစ်မြို့သို့ငါဂီတကစားခြင်းရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အနေလိမ့်မည်။
Aishaဖြေ - အတင်းအကျပ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့ခဏတာပြန်ဖြစ်တာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်တချိန်လုံးလုပ်နေတာတွေ့ခဲ့ရပြီးရပ်တန့်ဖို့အရမ်းခက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကတတိယအကြိမ်ဆေးကြောခြင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ (တစ်ခုစီသည် ၃ ပတ်ခန့်ကြာသည်။ ) ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာမည်သည့်အရာနှင့်မှတကယ်မရုန်းကန်ခဲ့ဖူးဘူး Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကထွက်ခွဲထားခဲ့သည်ပြီးတော့သောနောက်ကျန်းမာ masturbate နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်သင်၏ဦးနှောက်သည်အထိခဏရှောင်ကြဉ်ရန်ရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ငါငါ့အဘို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းကောင်းတစ်ဦးအနည်းဆုံးအကွာကြောင်းကိုထင်ပါတယ်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးအဖွင့်ပေးဖို့ကြိုးစားနေစတင်သောအခါမူကားငါပြန် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့ဆွဲခံရဖို့မရှိစေရေးအတွက်မဟုတ်တော့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကရင်: (နေ့ ၂၄) ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၊ သွေးကြောများနှင့်မင်းကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ရန် No Fap ကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ငါသည်လည်းငါ့အိမ်ထောင်ဖက်ဘက်မှာပါဝင်နေပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသာရလဒ်များအရအိပ်ယာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာတကယ်ကိုအမှုအရာပြောင်းလဲစေပါသည်။ ငါကလိင်အကြောင်းအမြဲစဉ်းစားမည့်အစားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာများအားယခုတွင်အပ်နှံသည်။ ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းကသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ပိုမိုလိုချင်သောဆန္ဒနှင့်တန်ဖိုးထားမှုများတိုးများလာကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါကပိုပြီးလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်မှုခံစားရတယ်။
Nyra: တစ်နေ့တာ 26 မှာတိုးတက်မှု:
ငါအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကြိုးနှံစှာပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်း AM
ငါကစူပါမော်ဒယ်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါနည်းနည်းလေးကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတယ်၊ ငါဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်
၎င်းသည်changeရာမအပြောင်းအလဲမဟုတ်သော်လည်းလိင်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုပြင်းထန်သည် (၎င်းသည်စတင်ရန်အလွန်ပင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း)၊ ကျွန်ုပ်သည်သိမ်မွေ့သော၊
ငါဘယ်တော့မှဘ ၀ အပြောင်းအလဲမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကငါ့အလုပ်အတွက်ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်တယ်။ ငါနည်းနည်းအာရုံထွေပြားနေဖို့, ငါအလုပ်အပေါ်အနည်းငယ်ပိုနေဖို့။
Dee: ဒါဟာခဏတစ်ရုန်းကန်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ငါဆက်တိုက်လပေါင်းများစွာရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါငြီးငွေ့နေတော့ငါမလုပ်တော့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာပျင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်သက်သာမှုရစေတဲ့အရာပဲဆိုတာငါသိတယ်။ ငါစီမံကိန်းတခုကိုလုပ်နေကဲ့သို့, ပိုပြီးရေရှည်အရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့်၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနသည်အလွန်အဖိုးတန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ထင်ဆဲဆဲဖြစ်သည်။ ငါစွဲ၏သဘောသဘာဝနှင့်ပတ်သက်။ အများကြီးလေ့လာသင်ယူ, ငါတကယ်လိုချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကမဖြစ်မနေတစ်ခုခုလုပ်နေတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုပ်နေတာသောအခါငါပိုသတိထားမိဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့ကြိုးပမ်းနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ငါဟာပိုပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်။ ငါသကြားစွဲခြင်းနှင့်အခြားပိုမိုအားကောင်းသောအရာဝတ္ထုများကဲ့သို့သောအရာများကိုသင်ယူခဲ့သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ အခုတော့ငါပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာခံစားရတယ်။ အရာရာတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်လုပ်တာကကျန်းမာရေးကောင်းတယ်။ မင်းလုပ်နေတာသင်သိပြီးနေသမျှကာလပတ်လုံးနဂါးကိုလိုက်ဖမ်းနေတာမျိုး၊
Ashleigh: ၂၀ ရက်တာကသိပ်ပြီးမလွယ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအတွက်တော့ ဒါ့အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က ၁၂ ကီလိုဂရမ်ကိုငါဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအရမ်းကြောက်မိတယ်။
ဂျုံးအမျိုးသမီးများအတွက်ဤဆံပင်အချိုးအစားသည်အလွန်အကျွံ fapping ဖြစ်ခြင်းဟုခံစားမိသည်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီပါးလွှာပြီးဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ဆတ်ရှိခဲ့တယ်။ ငါ့မိသားစုထဲကလူတိုင်းမှာဆံပင်ထူထူတွေရှိတယ် (အမေကလွဲလို့ဘာကိုခန့်မှန်းလဲဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါက porn / fap မဖြစ်မနေ / စွဲလမ်းမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်) ငါဟာအမေ့ရဲ့ပါးလွှာတဲ့ဆံပင်မျိုးဗီဇရှိတယ်ဆိုတာပဲငါမှန်းလိုက်တယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က nofap ကိုရှာတွေ့ပြီးရက်ပေါင်း ၉၀ ရောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ငါဘယ်တော့မှမရပ်တန့်ခဲ့ဘူး၊ တစ်ခုမှပြန်လာတာကကျွန်မကိုပိုပြီးအလုပ်များစေတယ်။ ငါကိုယ်တိုင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဂရုစိုက်စပြုလာသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအာဟာရအမြောက်အမြား (အမျိုးသမီးမိုးနှိုးဆွသောအရည်များသည်ရေမျှသာမဟုတ်) မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်စားခဲ့စဉ်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ဘီလီဗိုက်တာမင်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်သောက်နေသည့်အပြင် ငါသည်လည်းဗီတာမင် D နှင့် C. ကိုပစ်လွှတ်လိုက်သည်။ ထူးခြားသည်။ ငါရာသီအပြောင်းအလဲကာလအတွင်းရလေ့တူသောငါနေမကောင်းမဟုတ်, ငါ့အသားအရေပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်း (fap နှင့်ဆိုင်သောစိုးရိမ်စိတ်ပျောက်ကွယ်ခြင်းမှလွဲလျှင်) ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်အထူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေကနေ့စဉ်ဗိုက်ဗစ်တာမင်နေ့စဉ်ဆံပင်ကိုယူခြင်းကသာယာလှပတဲ့ဒီဆံပင်ကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။ သူတို့နားလည်သဘောပေါက်တာကငါဟာ P / MOing မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဤအရာများစွာကိုသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ပေါင်းစပ်။ သိနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအာဟာရဖြန့်ဝေမှုစာရင်းတွင်ပထမ ဦး စားပေးဖြစ်ပြီးကျန်အရာအားလုံးသည်ဒုတိယဖြစ်သည်။
သူ Alicia: [အထက်ပုံပြင်] ဆုတ်ခွာခြင်းသည်ခက်ခဲသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ တခါတရံမှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လမ်းကိုဖောက်ဖျက်မိသည့်အိပ်မက်များရှိသည် (သို့) ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခဲ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကြောင်းအိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။ လ၏အချို့သောအချိန်များတွင်သိသာသောအကြောင်းပြချက်များ (yay hormones!) ကြောင့်ပိုမိုပြင်းထန်လာသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်၏မှတ်တမ်းကိုမချိုးလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
ထပ်ဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများရရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၉၀ ထိသေချာစွာစောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကာယပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ပိုမိုသန်မာကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါအလုပ်ပြန်လုပ်တော့ငါ့ဘဝမှာအဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ဒါ့အပြင်ငါကကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အာရုံစိုက်ဖို့ပိုပြီးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းကကျွန်ုပ်အားကြမ်းတမ်းသောအခြားသူတစ် ဦး ကိုခံရပ်နိုင်ရန်နှင့်ထွက်ခွာရန်ရွေးချယ်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းအခိုင်အမာယုံကြည်သည်။
မှ Terra: (Day ၉၈) အရင်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်ကျွန်တော့်ဘဝဟာပြောင်းလဲသွားပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါရှောင်ကြဉ်တာကိုငါဘယ်လောက်အထိချီးကျူးရမှန်းမသေချာဘူး။ ကျွန်ုပ်တွင်အလုပ် ၂ ခုရှိသည်။ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည်။ ၁၃၅ ပေါင်မှ ၁၁၅ ပေါင်အထိကျသည်မှာကျွန်ုပ်သည်နှစ်များကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
Porn ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုသည်စစ်မှန်သောလိင် (အချို့အသုံးပြုသူများ) တွင်တုန့်ပြန်မှုအားနည်းခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောလိင်မှုကိစ္စများကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုယုံကြည်စေပြီး၊ porn ကြယ်များကဲ့သို့အကုသခံရဖို့လိုခငျြ, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့ကိုမိတ်ဖက်ရဲ့ porn-shaped ယုံကြည်ချက်သည်းခံစေ။
ဥပမာအားဖြင့်ဤမိန်းမငယ်သည် (ယူကေစာတမ်းတစ်ခုတွင်) သူမ၏ရည်းစား၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူ၏ဆန္ဒအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ကြောင်းအစီရင်ခံသည် မျက်ရည်တွေကျရင်းငိုသံမုဒိမ်းမှုမြင်ကွင်းများထပ်ဖွသူမကသူမမုဒိမ်းကျင့် porn ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံသူမ၏ဆောင်ဖို့မိသောကြောင့်သာမန်များ၏အကွာအဝေးအတွင်းခဲ့ကြသည်ယူဆထားတဲ့။
Whitneyဖြေ - အပြာအကန့်ကိုကြည့်ရတာငါ့ကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထိခိုက်ခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုအမျိုးသမီးများနှင့်မတူပါသနည်း။ ငါ့ရင်သားတွေဘာကြောင့်သေးငယ်တာလဲ ကျွန်ုပ်၏သန္ဓေသားလောင်းများသည်အမျိုးသားများအတွက်ပိုလိုလားသည်မဟုတ်ပါလား။ ငါဖျော့ဖျော့ဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ရိတ်, ချုံ့, ချုံ? အဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောညည်းမ, ထိုမိန်းကလေးများလုပ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ငါ cum လို့မရပါဘူး? ငါနုပျိုစဉ်က porn သည်အတုနှင့်လက်တွေ့မဆန်သောသဘောကိုနားလည်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူခဲ့သည်။ အမှန်အတိုင်းလက်ခံ 20/20 ဖြစ်ပါတယ်
လီနာ: ငါ့ရည်းစား porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတက်ပေးခြင်းမှတဆင့်မိမိအ ED ၏ပျောက်ကင်းအောင်ကုသထားပြီး, ပြီးတော့ကတည်းကကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံပါပြီ။ nofap စတင်ပြီးနောက်, ငါအချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ချွတ်ရငါ့နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်! အကြှနျုပျ၏ရည်းစားသူသူမ၏ဆံပင်ညည်းတွားခြင်းနှင့်ပစ်ပေါက်သူအချို့ pornstar လိုကဲ့သို့ငါ့ကိုစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်နှင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နဲ့အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးကဲ့သို့ငါ့ကိုကုသ: အဘယ်ကြောင့်သင်တို့ကိုငါပြောပြလို့ရပါတယ်။ သူပျြောမှေ့စခံစားချက်တွေကိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင် set ကိုသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်ငါ့ကိုမထင်မထားတဲ့အားထုတ်မှု, ဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုအဖြစ်။ သူမရှိတော့သူအပေါငျးတို့သညျဤအရူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးလုပ်ဆောင်ပြုခဲ့သလိုခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လိင်ခံစားရုံလူနှစ်ဦးဖြစ်ကြသည်။ ငါအထွတ်အထိပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်အခါသူကအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိသောအခါသူ့ကိုပေါ်မှာငါ့ကိုအာရုံစိုက်သာငါ့ကို, ငါ။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ခြားနားချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒါနဖြေ - ကျွန်ုပ်မှာညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုပြproblemနာမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်ခဲ့တာ (လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဖြေးဖြေးချင်းပြန်ကောင်းလာတာ) မှာဒီအယူအဆမှာမိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့ pornstar လိုပြုမူလုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။ အဆက်မပြတ်ကျယ်လောင်သောညည်းသံ၊ အလွန်အမင်းချဲ့ကားပြောဆိုခြင်း၊ ရာထူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲခြင်း၊ (အဆင်ပြေ၊ အတု) ၁၀ ခုရှိသော်လည်း၊ မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ တကယ်ကိုအတုဖြစ်နေတာ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဒါမျိုးဖြစ်ပုံရတယ်၊ ပြီးတော့ယောက်ျားတွေကြိုက်နှစ်သက်တာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုအမှန်တကယ်မွေ့လျော်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာများသောအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးသင့်ကိုလိင်အရာ ၀ တ္ထုတစ်ခုလိုပြုမူဆက်ဆံတာဟာပုံမှန်အတိုင်းပဲလို့ထင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။
"အမြိုးသမီးမြား, အဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖွင့်လှည့်နေကြပါတယ်" အီဗန်ကပြောပါတယ်လည်း 31 ။ "ကျွန်မနေတဲ့စိတ်ကိုနူးမိပါတယ်။ ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ arousal အပေါ်ကိုချွတ်ရ။ သို့သော်လည်းငါသည်အမြိုးသမီးမြားယခုအများကြီးပိုပြီးအသံလာပြီဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါတယ်။ ကျွန်မသတိထားမိပါဘူးတစ်ခုခုလုပ်နေတာပေါ့, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေ porn တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်တူတဲ့မှစတင်နေကြသည်ဖြစ်စေ။ ရိုးရိုးသားသား, ကကြင်ကြင်နာနာ၏လိုက်တယ်ပါပဲ။ ငါကကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်သေချာမသိဘူး။ "
အတူတကွအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ယနေ့အချိန်တွင်အလွန်များပြားလှသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏သီးခြားစိန်ခေါ်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်သနားခြင်းကရုဏာသည်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ femstronaut ထောက်ပြသကဲ့သို့
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာလူတစ်ယောက်လိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်။ ဆုလဒ်စနစ်နဲ့ဘာမှခြားနားမှာမဟုတ်ဘူး။ အရက်သောက်ဖို့ ဦး ဆောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်မရှိပါ။ ပုံမှန်အတိုင်းတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုမှလွဲ။ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုများသည်လည်းအတူတူပင်။ မလုံခြုံမှုများသည်ကျား၊ မဆက်စပ်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ယေဘူယျအားဖြင့်မလုံခြုံမှုဟောင်းများသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဖိစီးမှုများကိုရေတွက်ခြင်းထက်မိမိကိုယ်ကိုမည်သို့အခြားနည်းဖြင့်ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုလေ့လာရမည်။ ယောက်ျားပြုသကဲ့သို့အတူတူပဲ။ "
“ r / PornFree ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကျွန်မကိုပိုပြီးရဲစွမ်းသတ္တိပေးပြီးရဲစွမ်းသတ္တိကိုပေးတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခု၊ အခု r / NoFap ကဒီမှာအတူတူပြproblemနာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါအရူးမထင်မှတ်ဘူး၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျားမနှစ်ခုလုံးကလူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရင်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသွားစေတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤနေရာတွင်လူပါပဲ။ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လူသားတို့၏ဒင်္ဂါး၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများမျှသာဖြစ်ရာနေရောင်ခြည်မထိရောက်မှီတိုင်အောင်ဤကျောက်တုံးပေါ်တွင်အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ”
အမျိုးသမီးတစ် ဦး rebooting အကောင့်ကိုဖတ်ပါ: အမျိုးသမီး - အသက် ၃၁ နှစ်၊ ၆ လ“ ဒီထက်ကောင်းလာမယ်”
(အမျိုးသမီး) နေ့ 47 ရက် NoFap - ဒီနည်းကိုအလုပ်လုပ်တယ်။
အသက် ၂၅ နှစ် - အမျိုးသမီး - ၉၁ ရက်ခက်ခဲသည့်အခြေအနေ
နောက်ဆုံးသတင်းများ - ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ ထုတ်ဝေသောဆောင်းပါးများနှင့်လေ့လာမှုများ -
2019 - ညစ်ညမ်းပြီးအဖော်နှင့်အတူလိင်ကွဲအမျိုးသမီး Intimate အတွေ့အကြုံများ
2019 - ဘာ၏ compulsive အသုံးပြုမှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အစိတျရငျးအလှူငွေ
ကောက်နုတ်ချက်: လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရ CIUS [Compulsive Internet Use Scale] ရမှတ်များနှင့်အမျိုးသားများအကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ အန္တရာယ်မြင့်မားသောအုပ်စုတွင်အမျိုးသမီးအုပ်စုငယ်များရှိနေခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်။Khazaal et al ။ , 2017), အမြိုးသမီးမြား၏ subsamples အပြုအမူစှဲတိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။
2019 - လူငယ်အမျိုးသမီးများနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ
2019 - အမျိုးသမီး, အသက် 31 - Porn ငါ့ကို desensitized
2019 - လိင်တူချင်းချစ်သူမိန်းကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်မလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်လူငယ်များကိုလိင်တူချစ်သူမိသားစုဝင်များမှဆယ်ကျော်သက်များထိခိုက်နစ်နာမှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်
2019 - လိင်စဉ်အတွင်းစိုးရိမ်နေ Feeling: 14 မှအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများခေတ် 60 တစ်ဦးအမေရိကန်ဖြစ်တန်ရာကိန်းနမူနာ မှစ. တွေ့ရှိချက် ('ကြောက်စရာလိင်' သည်အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုပျံ့နှံ့မှုနှင့် ပိုမို၍ အကြမ်းဖက်မှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေပါသလား။ )
2019 - အမျိုးသမီးနာရီ (ဘီဘီစီရေဒီယို - ၈: ၅၅-၁၈: ၄၀ သို့ကူးသွားသည်)
2018 - 18-50 တစ်နှစ်ကြားရှိအမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်း တွေ့ရှိချက်အရအမျိုးသမီး ၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကျူးလွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲများပြားလာနိုင်သည်။
2017 - တစ်ဦးကမိန်းမငယ် porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့အရာကြွင်းသမျှပေးခြင်းသူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်တိုးတက်ကောင်းမွန်ပုံကိုဖော်ပြထားတယ် (ဗီဒီယို)
2017 - အဆိုပါလူငယ်အမျိုးသမီးများစွဲ Porn မှ
2018 - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်ဖြစ်ပြီး၊
2018 - သင်ကအတူတကွ Porn Watch လျှင်5နည်းလမ်းများနီးစပ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်
2017 - (လေ့လာမှု) အမြိုးသမီးမြားအကြားပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ရှာကြံကုသမှု
၂၀၁၆ - (ဗီဒီယို) အဘယ်သူမျှမ FAP နှင့်အဘယ်ကြောင့်ငါကဘာလုပ်ကဘာလဲ?
၂၀၁၆ - (ဗီဒီယို) အမျိုးသမီးများအတွက် NoFap? - Semen ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရား
2018 - အမျိုးသမီးတွေအတွက် PIED ညီမျှသော (သင် youtube အင်တာဗျူး)
2014 - အမျိုးသမီး porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု မတရားသောအရေးကြီးတဲ့ porn / ဘာစွဲနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်ကိုပြသထားတယ်။
2014 - အမြင့် Porn အသုံးပြုခြင်းမှလင့်ခ်လုပ်ထားသောအမျိုးသမီးများအတွက် Hypersexuality ။
2014 - သုတေသီအစီရင်ခံစာများ အမျိုးသမီးညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်၊
2014 - အဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာလိင်: အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို Related အလားအလာများအကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ဘာသာရပ်လိင်စိတ်နိုးထ (သုတေသန-based စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း)
၂၀၁၆ - ၂၀၁၆ လေ့လာမှုအရမယားများသည်“ ယောက်ျားများထက်အိမ်ထောင်ရေးကိုပိုမိုထိခိုက်စေသည်”ကွာရှင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်တိုးနဲ့ဆက်စပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု။ "
2016 - porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုအပေါ်လေ့လာရ ထက်ဝက်ဘာသာရပ်များအမျိုးသမီးတွေ (ခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ရှင်းပြချက်) ။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်စွဲမော်ဒယ်နှင့်အတူ align နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဘာသာရပ်များအကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။
2016 - ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်လေ့လာမှု (PSB) သည်“ porn / sex စွဲသူများ” တွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းကျချို့တဲ့မှုကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက ပို၍ ဆင်းရဲသည်ကိုဖော်ပြသည် အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ဦးဖြစ်သော (hypofrontality) မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ဖြစ်ပေါ် key ကိုဦးနှောက်အင်္ဂါရပ်
2017 - ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်ကျဘာစွဲအပေါ်လေ့လာမှု။4အမျိုးသမီးများ၏% နှင့်ထိခိုက်ယောက်ျား၏ 19% ။
ဒီ post ထဲမှာပြန်ပြောပြကိစ္စများ၏မျိုးစုံကြုံတွေ့နေရသူအမျိုးသမီးများနေ့အကျိုးစီးပွားဤပစ္စည်းများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
မှ ဗြိတိန်ရဲ့ ကွေးနနျးစကျ:
အမျိုးသမီးများမနည်းဟာမှကျရောက်နေတဲ့များမှာ porn ကိုကြည့်၏ဆိုးကျိုးများကို ထက်လူဖြစ်ကြ၏။
"ငါခဏဖြတ်ရန်ရှိသည်သည်အထိငါတိုးအမာခံ porn စတင်ကြည့်ရှု"
Siobhan ရို, အမေရိကန် GQ များအတွက်လိင်ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်, ငါသည်အ Pornhub ကိုကြည့်နဲ့ကျွန်မလိင်ဆက်ဆံလူနှစ်ဦး၏ရှေ့တော်၌ဒါ arousal သည်အဘယ်မှာရှိမှာပထမဦးဆုံးငါသည်လူသို့အရငျစဉျးစားကွညျ့တူညီသောစိတ်ဓာတ်သို့ get "ငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ပြီးတော့ငါက 'ငါပိုပြီးတစ်ခုခုလိုအပ်ပါတယ်။ ' 'နှင့်တူပေါ့ ငါခဏဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းရန်ရှိသည်သည်အထိငါပိုပိုပြီးအမာခံ porn မှာရှာဖွေနေစတင်ပါ။ "
ပုံမှန်ညစ်ညမ်းလေ့လာသူများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်နှိုးဆွမှုနည်းသည်ဟုခံစားရလေ့ရှိကြသည် - ရိုဆန်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် "ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမကြည့်ရအောင်ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ကျွန်မနှစ် ဦး စလုံးသဘောတူစာချုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးအဲဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ရဲ့လိင်ဘဝကပိုကောင်းလာတယ်။ "
အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းကိုကွာရှင်း၏နှစ်ဆအန္တရာယ်ရှုမြင်တဲ့သူအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲ: အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်များအတွက်အသေခံ knell ဖြစ်ပါသည်
"ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်သည့်အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများသည်ကွာရှင်းမှုနှုန်းထက်နှစ်ဆနီးပါးရှိကြောင်းသုတေသီများကယမန်နေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။ … Mjw.org my သူမကြည့်ရှုခြင်းကိုရပ်တန့်ပါကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သောစုံတွဲများအကြားကွာရှင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေသည် ၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားကြောင်းသတင်းများကမည်သူ၏ဇနီးများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်သည်ကိုအားပေးမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူမဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကွာရှင်းခြင်းဟာ ၁၈ ရာနှုန်းပဲရှိတယ်။
porn နှင့်လိင်အရသာ morphing အကြောင်းကိုအပိုဒ်
Collegiate အမျိုးသမီးများနေ့များထဲတွင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: ကျားသဘောထားခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2018)
အောက်မှာအမျိုးသမီး comments ဤဆောင်းပါးတွင်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်စွဲ - ယောက်ျား၏ပြjustနာမျှသာမဟုတ်ပါ
အမျိုးသမီးများနေ့ Porn-Related ပြဿနာများလှနျးအစီရင်ခံနေ (ရေဒီယို show ကို)
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏ overconsumption မှပြန်လည်ထူထောင်ယောက်ျားမိန်းမတို့၏စစ်မှန်သော, အထောကျအကူအထောက်အပံ့ရှာဖွေနေပါသလား အလည်အပတ် REDDIT.NoFap. ဒီ post ထိုတွင်ရှိလူအများစု၏ကြိုဆိုခြင်း၊ ဂရုစိုက်တတ်သည့်သဘောထားကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း၊ Moderator အဖွဲ့တွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရှိသည်။
"nofap" ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သောအမျိုးသမီးများမှ YOUTube လိုင်း ၃ လိုင်း -
Chel-lalasVeganMania ►: https://www.youtube.com/channel/UCyb-…
http://www.hopeandhealinglds.com / ဘို့-အမျိုးသမီး-စွဲ /
http://www.attcnetwork.org/လေ့လာသင်ယူ / အကြောင်းအရာများ / အမြိုးသမီးမြား / နာလန်ထူ။ASP
http://www.hopeandhealinglds.com / ဖိုရမ်-for-မယားများ /
http://www.loveshack.org/ဖိုရမ်များ / စိတ်ထဲ-ခန္ဓာကိုယ်-ဝိညာဉျသ /စွဲ-ပြန်လည်နာလန်ထူ /
http://theologica.ning.com/ပရိုဖိုင်း / ဘလော့ဂ်များ / ဘယ်လို-အများအပြား-women--စွဲနေကြသည်-to-porn-10-stats-ကြောင်း-May-စျေးမှာ-သငျသညျ
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုporn ပြဿနာများ: ဒီနေရာတွင် (2013) အမျိုးသမီးများကလာပါ"
07 မှာ 12 / 2013 / 11: 29 ညနေ
အိုးဤ subreddit ရှာတွေ့ကတည်းကငါဘယ်လောက်ဝေးကြပြီ ငါအရမ်းထောက်ခံဖြစ်ခြင်းများအတွက်လူတိုင်းအတွက်အလုံအလောက်ကျေးဇူးတင်လို့မရပါဘူး။ ရက်ပေါင်း ၆၀ မညစ်ညမ်း၊ ၂၆ ခုသည် MO မရှိဘဲ နှစ် ဦး စလုံးငါ့အဘို့အသစ်သောမှတ်တမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ငါဟာစွမ်းအင်ရှိဖို့အမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးအလယ်မှာရှိနေသလိုခံစားရတယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့အစာ၊ ပိုကောင်းတဲ့သဘောထား၊ ဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက်ရှိအရာအားလုံးအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ပိုမိုများပြားလာပြီးကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ငါ့အသံလည်း "sexier" အသံ။
07 မှာ 25 / 2013 / 3: 18 နံနက်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ porn ကရှင်းပြသည်
ငါကညစ်ညမ်းတဲ့ပြproblemနာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုရှုထောင့်အချို့ပေးနိူင်တယ်။ ငါ porn ကိုကြည့်တဲ့အခါငါသေချာပေါက်ငါမြင်သောအရာကိုမကြိုက်ဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကငါ့ကိုပယ်လိမ့်မည်ဟုငါသိ၏။ အဲဒါ ဦး နှောက်ပါပဲ။ ငါတစ်ခါတစ်ရံငါကြည့်ရှုသောအရာတို့ကိုအမျိုးအစားများ, ငါဘယ်တော့မှလုပ်လိမ့်မည်ဟုအရာဖြစ်ကြ၏, ငါခင်ပွန်းအပေါ်လိမ်လည်မှုဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
ငါ့ရဲ့ကုထုံးဆရာကငါ့ကိုမင်းရဲ့ ဦး နှောက်ထဲကိုဆွဲသွင်းမယ်ဆိုရင်ရွံရှာဖွယ်၊ အပြစ်ရှိသည်ဟူသောခံစားချက်၊ ဒေါသသည်အော်ဂဇင်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သူသည်ညစ်ညမ်းသောပညာရှိသူကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ သူအားစိတ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဆိုးဝါးသောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုငါမသိသောကြောင့်သေချာမသိပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်အသုံးများသောယန္တရားဖြစ်သည်။
nofap လုပ်တာကလူတစ်ယောက်ကိုဒီယန္တရားကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ခွင့်ပြုတာပါ။ မင်းသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးသင့်တယ်ထင်တယ်၊ သူပြောင်းလဲဖို့သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချက်ကအရမ်းကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲ။ ငါခင်ပွန်းသည်များထိုသို့ပြုသူအမျိုးသမီးများစွာကိုငါသိ၏သူတို့ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားနေပင်စဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ကသူနှင့်ကပ်ပြီးသူ့ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်အဆုံးမှာတော့သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပိုမိုခိုင်မာလာမှာပါ။
08 မှာ 17 / 2013 / 6: 40 ညနေ
nofap လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရလဒ်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ အခု ၁၅ ရက်ရောက်နေပြီ။ ငါချစ်တဲ့လူတွေကိုငါပိုပြီးဂရုစိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်။ ငါသည်လည်းအချိန်တိုင်းချက်ပြုတ်နှင့်မုန့်ဖုတ်နေပါတယ်။ ဒါဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့တင်းမာမှုဖြေလျှော့ပုံရသည်။ ဤသူသည်ငါကျိန်းသေမျှော်လင့်မခံခဲ့ရတ ဦး တည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပါ! ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အီစထိုဂျင်နှင့်ပရိုဂရမ်ဟော်မုန်းတိုး ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာမေ့လျော့င့်
09 မှာ 13 / 2013 / 12: 12 နံနက်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ကစတင် thread nofapper
09 မှာ 27 / 2013 / 6: 40 ညနေ
“ ဆောင်းပါးစိတ်ပညာယနေ့” ပေါ်တွင်တင်ထားသောထင်မြင်ချက်ကိုအခြားဆောင်းပါးတစ်ခုတွင်ဖော်ပြထားသည်
အမျိုးသမီးလိင် drive ကိုလူတို့ / စေဆုံးရှုံးမှုအတွက် ED ဖြစ်စေတဲ့ porn ငါအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မ porn လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ငါ့ရည်းစားပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲဖွင်ရနိုင်ဘူးလို့ပဲ။ ဒါကြောင့်သူကငါ့ကိုငါပထမဦးဆုံး porn ကိုကြည့်ပြီးတော့လိင်ဆက်ဆံသို့မဟုတ် masturbating မပါဘဲဖွင်ရနိုင်ဘူး him.For အချိန်ကြာမြင့်စွာအတူကစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတယ်။
ခဏတစ်နောက်မှငါညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲမှာအားလုံးဖွင်ရနိုင်ဘူးငါသော်လည်းမလိင်ကနေငါ masturbated တဲ့အခါမှသာတစ်ဦးအော်ဂဇင်မရနိုင်ဘူး။
ငါလိင်ကနေအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့သူတို့ထဲကအချို့အော်ဂဇင်မရနိုင်စေရန်စကားပြောခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့က porn စောင့်ကြည့်သည့်အခါသူတို့လို့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအသာလည်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ယောက်ျားတွေမထိခိုက်ပါဘူး။
10 မှာ 03 / 2013 / 4: 13 ညနေ
https://web.archive.org/web/20140830184657/http://theologica.ning.com/profiles/blogs/how-many-women-are-addicted-to-porn-10-stats-that-may-shock-youပရိုဖိုင်း / ဘလော့ဂ်များ / ဘယ်လို-အများအပြား-women--စွဲနေကြသည်-to-porn-10-stats-ကြောင်း-May-စျေးမှာ-သငျသညျ
10 မှာ 10 / 2013 / 11: 45 ညနေ
[ညစ်ညမ်းသောချိတ်ဆက်နေသောမိန်းမငယ်တစ် ဦး သည်သူမ၏ရည်းစား၏အကူအညီကိုရရှိသည်]
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်၏b/fအကြောင်းပြောပြပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၏ PMO ပြaboutနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပိုမိုခံစားခဲ့ရသည်။ သူကမလုံခြုံမှုနည်းသည်ဟုခံစားရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဆက်ဆံခြင်း / လိင်ပြproblemsနာများသည်ကျွန်ုပ်၏ PMO ပြwithနာနှင့်များစွာသက်ဆိုင်သည်ကိုသိသောကြောင့်သူစိတ်သက်သာသွားသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အခုတော့သူဟာကျွန်တော့်ရဲ့တာ ၀ န်ခံမှုရှိသူပါ။ မနေ့ကကျွန်တော်ပြန်လာပြီးအဆိုးဆုံးအပိုင်းကသူ့ကိုပြောပြဖို့ပါ။ 🙁သူက“ ငါတို့အတူတကွ ၀ တ်နေပြီ” လို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူကိုပြောခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူ့ကိုကူညီထောက်မမှုတစ်ခုလောက်ငါခံစားရတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့လူတိုင်းကမတူကြဘူး၊ ဒါပေမဲ့မင်းကb/fဆိုတာ PMO ထဲကိုအတော်လေးဝင်နေမယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူကြိုးစားရပ်လိုက်တာကောင်းလား။
10 မှာ 18 / 2013 / 6: 44 ညနေ
အမျိုးသမီးကို restart အကောင့်
အမျိုးသမီး - ရက် ၉၀ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးလာသည်။ အရာအားလုံး ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်
12 မှာ 09 / 2013 / 5: 01 နံနက်
သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ရှုထောင့်။
ငါအင်တာနက်မတိုင်မီငါလိင်ဆက်ဆံစတင်ခဲ့သည်။ ဒီဟာကကျွန်တော့်ကိုတခြားနည်းနဲ့တကယ်ရှုပ်နေစေနိုင်တယ်။ လိင်သည်ကောင်းလေ့ရှိသည်။ ငါတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုလိုတာက ထိုအခါတစ်ခုခုပြောင်းလဲလာတယ်။ ငါလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကသတိပြုမိသည်။ လိင်ပို။ ပို။ မကျေနပ်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါစဉ်းစားနိုင်တာကဒီဟာကပုံမှန်အတိုင်းပဲ၊ ငါ့အသက် ၂၀ ပဲရှိသေးတယ်။
ကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကပင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကအဆတိုးများလာတယ်လို့ငါထင်တယ်။ လိင်ဟာအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအရမ်းမနှစ်မြို့စရာဖြစ်လာလို့ငါထင်တာတော့ကျန်ဘဝတစ်သက်လုံးအတွက်မာစတာဘုတ်အဖွဲ့ကနေနုတ်ထွက်ခဲ့တယ်။ ဒါကကျွန်တော့်အသက် ၂၀ ကျော်မှာပါ။ ဒါအရူးပဲ
တစ်ခါတလေ fap နဲ့ porn ဟာယောက်ျားတွေကိုမှားယွင်းစေတယ်ဆိုတာအရိပ်အမြွက်တွေရဖို့စတင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က thete ဟာ nofap မှာဘယ်အချက်အလက်မှမရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာငါ့ရည်းစားကပြုံးရယ်နေတဲ့မင်းရဲ့သုတ်ရည်လွှတ်မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့စာအုပ်ဟောင်းကိုငါတွေ့ပြီ။
နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်လောက်အစာရှောင်ပြီးလိင်စိတ်ဟာသင်မှန်းထားတာထက်ပိုဆိုးတယ်။ ဘာလို့လူတွေဘာကြောင့်ဒီထက်ပိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူး။ အခုပိုဆိုးတာကငါပြofနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆိုးသောလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုရှိခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် PMO ကိုအခမဲ့မရှာနိုင်ပါကကျွန်ုပ်သည် ထပ်မံ၍ မပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အသက် ၃၀ ကျော်လောက်ကတည်းကပါ။
ငါကိုယ်တိုင်ဒီမှာရှည်လျားရှုပ်ထွေးနှင့်အတူအချို့သောအလွန်ရှုပ်ထွေးသော Streak ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတကယ်ပြောနိုင်တာကမင်းကအဲဒါကိုပြန်ရတယ်။ သင်ရပ်တန့်ပါက၊ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုပြုလုပ်သောအော်ဂဇင်တစ်မျိုးထက်အဆသန်းတစ်ရာပိုကောင်းသည်။
ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝ၏အနှစ် ၂၀ ကဲ့သို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူတို့သာမဟုတ်ရင်ငါပဲ။ မပုံပါနဲ့ ဒါကိုသင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပါနဲ့ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကိုဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ လိင်သည်ပျော်စရာဖြစ်သည်။ သာယာဝတီ။ သင်တ ဦး တည်းကိုပွတ်သပ်အခါတိုင်းသင်ကဖျက်ဆီး။ သင်မိန်းကလေးအတွက်၎င်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးသည်။
သင့်အိမ်ရှိကွန်ပျူတာနှင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသောကလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်သင်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အပျိုစင်ဘဝကိုမဆုံးရှုံးမီညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ကြီးထွားလာသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူများဖြစ်သည်။ မင်းရှုံးနိမ့်တာငါသိတယ် ဒါတွေအားလုံးအတွက်ငါကျေးဇူးတင်မိတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ။ ငါပျောက်နေသောအရာကိုငါသိ၏။
12 မှာ 30 / 2013 / 1: 18 နံနက်
ဤသည်နေ့ရက်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်မစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ funk အတွက်ကပ်လေ၏။ ကျွန်မထက်ပိုရှည်ခြောက်နှစ်နှင့် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့ compulsive လိင်၏တူညီသောသံသရာထပ်ခဲ့သညျ။ ငါလိမ်, ခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်ဟန်ဆောင်မှာအလွန်ကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုမျှငါသည်အခြားအရာတစ်ခုခုပေါ်ငါ့အလိုရှိသမျှပြဿနာများအပြစ်တင်နိုင်, ငါ့အမှားဖြစ်ခဲ့သည်, ငါဆင်ခြေအောင်မှာအကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်လိင်စှဲလမျးသူ။
ငါ 2009 ကတည်းကလိင်စှဲလမျးသူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်ုပ်သည်မူးရူးသောက်စားရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါး, ပေါင်းပင်များနှင့်ကလပ်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားပါပြီ။ ဝတ္ထုများ၏ချွတ်ရယူခြင်းငါလုပ်ဖို့လိုအပျသောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများကိုနှိုင်းယှဉ်လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ တချို့ကအကြှနျုပျ၏လိင်စွဲလမ်း၏အကျိုးဆက်များကိုထည့်သွင်း (သို့သော်ကျိန်းသေရန်ကန့်သတ်ထားကြသည်မဟုတ်) ငါ၏အရေရှည်မိတ်ဖက်အပေါ်မျိုးစုံစိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများကိုမကြာခဏ, တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံရေးရာရှိခြင်းမှလဲလျောင်းနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်အဘို့အခြားသူတွေကြိုးကိုင်, compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရုံ နေ့ကိုတဆင့်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, စိတ်ခံစားမှုလှီလှည့်ပတ်ရရန်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစွန့်ခွာပြီးတစ်စုံတစ်ရာကမကျန်းမာတဲ့အရာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့နောက်တစ်ခုသို့ခုန်ကူးလိုက်တယ်။ သို့သော် fapping သည်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ဟုငါထင်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်“ ငါဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူး၊ ဟုတ်လား?” ငါပိုနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းသိသောအခါငါဘာကြောင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိဘူး၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲကျွန်ုပ်၏နှစ်ကုန်ပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်သည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်အစီအစဉ်သည်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိပ်ရာမှထသည်၊ fap၊ နံနက်စာစားသည်၊ အလုပ်သွားရန်၊ လိင်အကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်နေစဉ်၊ ချက်ချင်းအိမ်ပြန်၊ fap၊ အိမ်မှုကိစ္စများ၊ အစားအသောက်ဆိုင်၊ တစ်ခုခုလုပ်ပါ၊ လုပ်ဖို့စွမ်းအင်ရဖို့ fap) အိပ်ပါ၊ အိပ်ပါ ဦး ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ညံ့ဖျင်းသောအစာစားခြင်း၊ သီးခြားနေခြင်းနှင့်အလုပ်ပျောက်ဆုံးရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤသည်နေ့ရက်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတစ်ဦး All-ညဥ့်-FAP-မူးရူးငါ၏အပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လာမယ့်ခြေလှမ်းကိုယူမှငါ့ကိုမှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ ဒါဟာ shit အဖြစ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ငါထဘောငျနဲ့နောက်ဆုံးမှာငါ့အစျခုလုံးကိုလိင်ကစားစရာစုဆောင်းခြင်းပစ်လွှတ်လိုက်တယ်။ ငါသည်ငါ့ဘရောက်ဇာကိုသမိုင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ပင်ငါ့အအရှိဆုံးမကြာခဏ porn ဆိုဒ်များတွင် software များပိတ်ဆို့ခြင်း installed ။ ငါ (ukulele သင်ယူခြင်းကနေချုပ်နှင့်အခြားအရူး shit တစ်တစ်တန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူအရွယ်ရှိ) ကိုကြိုးစားရန်လိုခငျြဝါသနာသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်အလုပ်များစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါတင်းကြပ်စွာအခမဲ့အချိန်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဘယ်တော့မှပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အကြှနျုပျ၏နေ့ရကျစီစဉ်ထား။ ငါသည်ငါ့ 12 ခြေလှမ်းအုပ်စုတစ်စုနဲ့ငါ့ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုမျှဝေပေးတယ်။
တစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်ခုခုအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါပထမဦးဆုံးအကြမ်းတမ်းလကနေတဆင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါ porn ကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, ကမပါဘဲအိပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, ငါစွဲလမ်းအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချငြိမ်သက်ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါဆုတ်ခွာရှောက်သွားလေ၏တစည်းအော်ဟစ်တချို့အစောပိုင်းကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာဆက်ဆံ။ အစောပိုင်းပေါ်မှာဤ subreddit ထံမှထောက်ခံမှုတွေ့သည်နှင့်ငါ့ကုထုံးနှင့် 12 ခြေလှမ်း group မှ။ ငါ, ဆာလောင်မွတ်သိပ်စိတ်ခံစားမှု, အထီးကျန်သို့မဟုတ်ပင်ပန်းအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာ, ပိုမိုတသမတ်တည်းထွက်အလုပ်လုပ်, ပိုကောင်းတဲ့အစာစားခြင်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသင့်ကိုသိနှင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါစနစ်တကျငါ့ကိုယ်ပိုင်မိတ်ကပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝတ်စားဆင်ယင်, ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကောင်းသောခံစားရရန်ငါ့ဆံပင်လုပ်ပါ။ ငါနေရာတိုင်းငါတတျနိုငျသကလေးခြေလှမ်းများကို ယူ. , တစ်အားကစားကစားစတင် junk အစားအစာဝယ်ယူရန်ရပ်တန့်စာကြည့်တိုက်မှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းငါ၏အဆွေများအတွက်ဂိမ်းညအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ, ငါ့ကိုအသစ်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့ငါ့ကို nympho / အဆိုပါအရက်မူးကြိုက်တယ်သူကလူတွေကိုပြောနေတာတော့ဘူး။
ကျွန်မအနည်းငယ်နီးကပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ3လနှင့် 11 လအတွင်းမှာပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်တဖန်မှာအတော်ကြာဖြောင့်ပတ်ဆုတ်ခွာရှောက်သွားလေ၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကမှတဆင့်ထိုင်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူတယ်။ ငါမရှိခဲ့ဘူးထင်စိတ်ခံစားမှုခံစားရဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြသည်။ ငါမရှိတော့လိင် / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူလွတ်မြောက်ရန်ဖို့လိုတယ်, မသက်မသာဖြစ်ရုံနဲ့ ok ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြသည်။ ကျွန်မစိတ်ခံစားမှုနဲ့အဓိပ်ပါယျမရှိသောကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိခြင်းရပ်တန့်ပါပြီ။ ငါ 10 ပေါင်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီးစိတ်ခံစားမှုစားရပ်တန့်ပါပြီ။ ငါယခုပင်ငါ့အ 12 ခြေလှမ်းအုပ်စုကိုဦးဆောင်လမ်းပြ။
ငါလုပ်ခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုကကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိရဖို့လိုသည်မှာတစ်နှစ်သည်အချိန်ကြာမြင့်ပြီးရာပေါင်းများစွာသောကလေးခြေလှမ်းများ၏စုစုပေါင်းဖြစ်သည်။ ငါပျော်တယ်၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးတော့သဘောပေါက်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာနေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်၏လိုအင်ဆန္ဒကိုမည်သို့သိရှိနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်လာသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းသိခဲ့တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပေးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာစွမ်းအားတွေပေးဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုရပ်တန့်ဖို့ပဲလိုတယ်။
ကိုယ့်အထဲကအဲဒီမှာအပေါငျးတို့သ Fapstronauts ရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ငါ့နှလုံး၏အောက်ခြေကနေပြောချင်တာပါ။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုခုခံနိုင်စွမ်းအောင်နှင့်၎င်းတို့၏ရုန်းကန်မှုများမျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိဒီ subreddit အပေါ်တိုင်းတစ်ခုတည်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လူတိုင်း (ပင် throwaways အပေါ်) ဝေမျှဖို့ဒီလုံခြုံအာကာသအောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသနေဆဲသူတို့ရဲ့ compulsive နှင့်၎င်းတို့၏ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူရုန်းကန်လူတိုင်းထွက်တတ်၏။ compulsive fapping သင်၏အသက်ကိုအာဏာရလျှင်သင်တို့ကိုငါရပ်တန့်ဖို့ခွန်အားကိုတွေ့လိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။
မနက်ဖြန်ငါ 1 တစ်နှစ်သမ္မာသတိရှိကြလော့ဖြစ်ကြောင်းကိုငါအသက်ကြီးသေဆုံးအထိဤလမ်းတည်းခိုအပေါ်စီစဉ်ထားသည်။ ငါသည်ဤမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီး sequence ကို aborting နေပါတယ်။
01 မှာ 30 / 2014 / 5: 31 နံနက်
NoPorn ယုံကြည်မှုအကြောင်းရှင်းပြထားသည် (အမျိုးသမီးများအတွက်ထုတ်ဝေခြင်း)
ငါကိုဖတ်ရှုနောက်ဆုံးညဥ့် / u / RainFallsOnEveryone 's post http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1wedby/noporn_confidence_explained/ သူကယောက်ျားအပေါ် porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြဘယ်မှာ။ ငါသည်သူ၏ post ကိုအမျိုးသမီးရှုထောင့်သို့ဘာသာပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
- ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုမှညစ်ညမ်းကြယ်များကိုကြည့်ပြီးသူတို့လိုချင်သောဆန္ဒရှိလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ကျသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုလိင်ကိစ္စသည်ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးများအားသင်ကြားပေးသောအရာဖြစ်သည် - ။ အရာဝတ္ထုတစ်ခု
- ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုစားသုံးသည်။ ဤ“ ပြီးပြည့်စုံသောခန္ဓာကိုယ်များ” ကိုပလတ်စတစ်ဖြင့်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ အစစ်အမှန်၏သညာသည်ပြောင်းလဲသွားပြီ။
ဤအဗီဒီယိုများအတွက်ရတာဟာအမြိုးသမီးမြားကွောငျ့, ရူပနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ (စက်မှုလုပ်ငန်းမှ) မိမိတို့၏ရင်သားအရွယ်အစား, နှင့်လိင်အင်္ဂါ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၏ရွေးချယ်ထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ -Most အမြဲသာမန်ယောနိရှိဖြစ်ကောင်း unshaven ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့မညီမညာဖြစ်နေသော labia minora နှင့် majora ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ labia တစ်လိုက်တယ်ပုံသဏ္ဍာန် / အရွယ်အစား / အရောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်သားကိုပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။ စတုရန်း / ပြား / ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဘက်လည်းအဆီ။
porn စောင့်ကြည့်သူများဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ဟာသာမန်မဟုတ်စဉ်းစားရန်ကိုယျ့ကိုယျကို brainwashing နေကြသည်။
ကျနော်တို့မလုံလောက်ခံစားရ porn ရှိလူမှကိုယျ့ကိုယျကို -Comparing, ဒီတစ်ခုမလုံခြုံမှုဖြစ်ပေါ်လာသောနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေဝေးရှက်။ (ထိုအယေဘုယျအားဖြင့်လူမှုရေးဖြစ်ခြင်းအနည်းဆုံးငါရှာပါ။ )
နိဂုံး - porn ကြည့်နေစဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ယုံကြည်မှုရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဖြေရှင်းနည်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်တာကိုရပ်လိုက်ပါ။ ဒီအတွေးကပျောက်သွားတယ် သငျသညျတဖနျလူမှုရေးဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ မင်းကမိန်းမ၊ မိန်းမအသစ်တွေနဲ့စကားပြောချင်တယ်။
ဤသည်မှာ NoPorn မဟုတ်ဘဲ NoFap အကြောင်းဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကိုယ်တိုင်၏အကျိုးဆက်များနှင့်သက်ရောက်မှုများရှိသည်။
တည်းဖြတ် * - နောက်မှတ်စုတစ်ခုထပ်ထည့်ချင်တယ်၊ ဒီဆိုးကျိုးတွေကစားသုံးမှုအဆင့်အပေါ်တကယ်မူတည်တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ကြည့်နေသူတစ် ဦး ဦး သည်ဤနည်းကိုခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ သို့သော်တစ်သမတ်တည်းကြည့်ရှုသူများသည်ဤဆိုးကျိုးများခံစားရလိမ့်မည်။
02 မှာ 26 / 2014 / 5: 07 နံနက်
[Post ကို r / nofap အပေါ်] http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1yx6yz/from_a_girls_experience_why_do_women_need_to_be/
ဒါကြောင့်ငါဘာကြောင့်မိန်းကလေးတွေဒီမှာရှိနေရတာလဲ၊ အမျိုးသမီးအတွေ့အကြုံကနေဘာမှမရနိုင်ခြင်းကဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတာရှင်းပြတဲ့အငြင်းအခုံတစ်ခုချချင်တယ်။ ငါစမယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းကအမျိုးသမီးများအားလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းသည်အမျိုးသားများသာစွဲသောစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည် အကယ်၍ သင်ဟာတစ်နေ့ကိုအကြိမ် ၂၀ ကြိမ်ခုန်ပေါက်နေသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုလျှင်တစ်ကိုယ်တော်ညဉ့်နက်ခြင်းအတွက်မိန်းကလေးများနှင့်အတူညစာမစားဘဲနေလျှင်သင်၏အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းသည်သင်၏တုန်ခါသူဖြစ်လျှင်လူ့အဖွဲ့အစည်းက '' ဟုတ်တယ်၊ မင်းကလိင်ဆိုင်ရာဉာဏ်အလင်းနဲ့လိင်အပြုသဘောဆောင်တယ်! ' ။ သင့်ရဲ့အပြုအမူကိုနောက်ကျလွန်း။ လက်မခံနိုင်ကြောင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှဘယ်သောအခါမျှသင်အရှက်ကွဲမည်မဟုတ်။ အမျိုးသမီးများစွာသည်ကျွန်ုပ်သည်လိင်စွဲလမ်းသည်ဟုထင်မြင်သည့်အချိန်သို့ရောက်သောအခါအရာရာသည်အမှန်တကယ်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ သူတို့ဟာသိသိသာသာကျေနပ်မှုမရရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ သူတို့မှာလုံးဝထူးခြားမှုမရှိဘူး၊ ငါတို့ရဲ့အောက်ခြေမှာတစ်ခါတစ်ရံအထီးကျောက်တုံးတွေထက်တောင်နိမ့်ကျတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကမိန်းမတွေလိုပြweနာရှိတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။
နောက်ဆုံးတွင်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါအမျိုးသမီးလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ငါမြင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုစီသည်ညစ်ညမ်းမှုအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မမြင်ရသော (နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာများ) ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အများစုကယောက်ျားတွေကိုပြုစုတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရစေတယ်။ ငါ၌စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုခံစားခဲ့ရကြောင်းသတိပြုမိသည်မှာမိန်းကလေးများသည်ဤပြproblemsနာများရှိသည်ဟုမယူဆရသောကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးရသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအမျိုးသမီးများနှင့်မည်သည့်အုပ်စုများကိုမျှရှာမတွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဖိုရမ်တွင်အမျိုးသမီးများကိုတွေ့ပြီးကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောသူမဟုတ်ကြောင်းသိသောအခါကျွန်ုပ်မည်မျှပျော်ရွှင်ခဲ့သည်ကိုမှတ်မိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်မှန်ကန်ကြောင်းခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုစတင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုခံစားမိသည်။
ဘယ်လိုအမျိုးသမီး PMO ကွဲပြားခြားနားသည်
အဘယ်သူမျှမ FAP အမျိုးသမီးတွေ fapping များအတွက်အခြားဝေါဟာရများအားပေးသောကွောငျ့အမျိုးသမီး PMO ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်မဟုတ်ပါဘူး။ (Schlicking? ဘာငရဲကြောင့်?) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိန်းမတွေကယောက်ျားတွေထက်များတာပိုများတာကြောင့် ငါ့မှာသူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်။ တစ်ညတည်းမှာပဲဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမိတ်ကပ်ဟာဒီလိုဖြစ်ပျက်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်များပြားတဲ့အချိန်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့မိန်းမအများစု (အားလုံးမဟုတ်) သည်များသောအားဖြင့် porn နှင့်မဟုတ်ဘဲ erotica နှင့်အချိန်များစွာကုန်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအတွေ့အကြုံတွင်ယောက်ျားများသည်အမြင်အာရုံများသော်ငြားလည်းထွက်ခွာရန်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများစွာပါ ၀ င်သည်။ အင်တာနက်နှင့်အတူ၊ နေရာတိုင်းတွင် erotica ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သော erotica အမျိုးအစားနှင့်ပတ်သက်သောဖိုရမ်များတစ်ခုလုံးရှိသည်။ အဆိုးဆုံးမှာကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်စာမျက်နှာ ၇-၈ ခုရှိသည်။ ၃-၄ နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်မက ကျော်လွန်၍ ပြည့်စုံသောလိင်ဇာတ်လမ်းကိုရှာဖွေသည်။ အမျိုးသမီး pmo ပြproblemနာကိုကိုင်တွယ်ရန် erotica ကိုကိုင်တွယ်ရပါမည်။ တုန်ခါ, ဒုတိယဖြစ်ကြသည်။ ဒီဟာကိုဘယ်တော့မှမသုံးဖူးဘူး၊ ငါသိတဲ့လူတွေသေခြင်းတရားအကြောင်းပြောဆိုပြီးမှသာလျှင်လိင်တံတစ် ဦး တည်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်း မှလွဲ၍ ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။
ဒီတော့ဒီမှာယောက်ျားတွေဆီကမှတ်ချက်တွေကိုငါဖတ်ပြီးပြီ။ သူတို့က vibrator ပါတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို sexy အရာလို့ထင်တယ်။ သူတို့အတွက်အမျိုးသမီး PMO သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်ညည်းတွားခြင်းများစွာအကြောင်းဖြစ်သည်။ ကြောင်း shit fuck ဆိုတဲ့။ PMO အမျိုးသမီးများသည် pmo အမျိုးသားများကဲ့သို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်ပြီးသနားစရာများဖြစ်သည်။ အိပ်ယာထဲလဲနေတဲ့ ၁၂-၁၅ ရက်အကြာမှာမင်းအနားမှာကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိချင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အထီးကျန်ဆန်။ အချည်းနှီးဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်ပြproblemsနာများကြုံရသောအခါ pmo သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လာတာနဲ့တူတယ်၊ သင်ကချွေးထွက်အင်္ကျီတွေ၊ ချွေးထွက်အင်္ကျီတွေလိုဝတ်စားဆင်ယင်တာကိုမနှောင့်ယှက်ချင်ဘူး၊ ဟေး၊ ယောက်ျားတွေကအရေးမကြီးဘူး၊ ဟုတ်လား ဟုတ်လား သူငယ်ချင်းများနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံရန်၊ ပါတီပွဲ၌မည်သူနှစ်သက်သည်ကိုမေ့တတ်ရန်ရှက်ရန်နှင့်လူမှုရေးအရအဆင်မပြေဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး PMO အကြောင်းမင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမနက် ၃ နာရီမှာအိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေပြီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစဉ်းစားဖို့တောင်းပန်ပါတယ်။ သူမအထီးကျန်ဆန်နေသောကြောင့်အအေးနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်အထီးကျန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုငိုခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျော်ကြားမှုနှင့် sexy ဘာမှမရှိဘူး။ Infact, ဒါကသင်လုပ်နိုင်သမျှလိင်မှုနည်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမင်းတို့ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်၊ ငါ့ကိုမင်းရဲ့လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းထဲဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီဖိုရမ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကြင်နာမှုပြတာကိုသတိပြုမိပြီး PMO ကိုရှင်းပြတာကအမျိုးသမီးရှုထောင့်ကနေအကျိုးများစွာရလိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒီအချက်ကဒီမှာယောက်ျားတွေကိုအမျိုးသမီးတွေဘာတွေကြုံတွေ့နေရသလဲဆိုတာကိုနားလည်ပြီးကျွန်မကိုလက်နက်ကိုင်အစ်မတွေအဖြစ်ဆက်ဆံဖို့ကူညီပေးမယ်လို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
09 မှာ 20 / 2014 / 8: 06 ညနေ
ငါ 26 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်၏။ ငါသည်ပျင်းရိတက်ကောက်ဖို့ porn အသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့တော်တော်ညျြးနှီးရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ကျနော်ကျိန်းသေနေ့တိုင်းငါ့ porn အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ယခုစေ့စပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျနော်တို့တော်တော်လေးမှန်မှန်လိင်ရှိသည်။ ငါလစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အလုပ်ထုတ်စဉ်အခါသို့သော်ကျွန်မအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက် masturbating ခဲ့သည်။ သူကအိမ်ပြန်ရောက်တော့အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံအစဉ်အမြဲငါလိင်ဒါမှမဟုတ်လိင်ရုံကြီးခံစားရမေ့သွားရောရှိခြင်းတူခံစားမေ့သွားရော။
ဒါဟာလေးပတ်ကြာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း, porn သို့မဟုတ်တုန်ခါခဲ့ပြီးငါပြောင်းလဲနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တူခံစား !!! ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်အတူတကွ ပို၍ သီးပွင့်လာပြီးချိတ်ဆက်လာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုငါ့ခေါင်းပေါ်မှ ဖြတ်၍ မရ။ သူကကျွန်တော့်ကိုပါးစပ်ရောလက်နဲ့ပါအခုလိုလွယ်လွယ်ကူကူလွတ်မြောက်နိုင်ပြီ၊ သူဟာပိုပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့သူလို့ငါခံစားရတယ်။ ငါကသူ့ကိုလိုချင်တောင့်တနေတဲ့ porn တပ်မက်ခြင်းပဲ။ ငါတိုက်တွန်းအားပေးနေတုန်းပဲ။
12 မှာ 04 / 2014 / 1: 08 နံနက်
ကြောင်းဈရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းကငါအထီးဖိုရမ်ကနေဒီနေရာကို redirected ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊
အကြှနျုပျ၏အကြီးမားဆုံး porn သွေးဆောင်ပြဿနာကိုယ့်ရည်းစားနှင့်အတူ orgasm မနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Ive သာသူမ၏နှင့်အတူ 1 အော်ဂဇင်နှင့်ဈ porn နှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျကြောင့်သာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ငါအဖြစ်ဝေး im သတိထားမိအဖြစ်ဘုံကိစ္စများအများအပြားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ငါတစ်နေ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနှင့်အတူအရူးအမြင့်ဆုံးသို့မသွားဘယ်တော့မှတကယ်တဖြည်းဖြည်းပိုပြီး hardcore တယ်ဘယ်တော့မှ။ ငါ၏အမိတ်ဖက်နှင့်အတူအော်ဂဇင်ဖို့နိုင်ခြင်းငါ့အကြီးမားဆုံးပြissueနာဖြစ်ပါတယ်။
6 ပတ်ကို restart ခဲ့ Ive ။
ဒီတော့လျှင်ဈသင်သည်အစဉ်အကျောပုံမှန်ရ DOD, မည်သူမဆိုငါ့ကိုအဖြစ်စိတ်ကောင်းသောပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်လျှင် im ရုံအံ့သြခန့်မှန်းခြင်းနှင့်?
12 မှာ 04 / 2014 / 1: 34 နံနက်
ဒီမှာငါတို့အစောပိုင်းကပြန်ကြားချက် - ဟုတ်တယ်, YBOP အထီးကြီးစိုးသည်,
12 မှာ 04 / 2014 / 3: 07 နံနက်
02 မှာ 01 / 2015 / 4: 09 နံနက်
118 ရက်ပေါင်း porn-အခမဲ့
ငါသည်ငါ့ 118 နေ့က Streak ပေါ်တုန်းကအများကြီးလျော့နည်းအချိန်ဖြုန်း။ ငါသည်လည်းပိုပြီးယုံကြည်မှုနည်းစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သညျ! ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်လူမျိုး၏အကြှနျုပျ၏အမြင်လည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။
02 မှာ 18 / 2015 / 5: 44 နံနက်
အမျိုးသမီး rebooter အကောင့်
အမျိုးသမီး - အသက် ၂၂ နှစ်နှင့်လက်ထပ် - တစ်နှစ်ကျော်တရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သည်
05 မှာ 11 / 2015 / 7: 26 ညနေ
ကျွန်မအသက် ၂၀ အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ဒီမှာငါ့ဇာတ်လမ်းပါ
ဒီတော့ဒါကအရူးပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါသုံးနှစ်ကြာကတည်းကငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ ငါသိ, အသံတက် fucked ။ ကျွန်မမှာအသက်အရွယ်တူတူဝမ်းကွဲရှိတယ်၊ သူမဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြတယ်။ ၎င်းနောက်ပိုင်းကုန်းမြင့်မြင့်စစ်ပွဲဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော့်မိဘတွေကကျွန်တော့်ကိုဖမ်းပြီးအရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ် သူတို့ကဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုရေချိုးခွင့်မပြုတော့ဘူး။ (ငါရေလည်တယ်။ မင်းဆိုလိုတာက)
ငါလက်များဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ကြောင်းသိလိုက်ပြီးဆက်ပြောသည်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာနားမလည်ဘူး ငါခံစားခဲ့ရတယ်၊ ကျွန်မအသက် ၁၂ နှစ်မှာလိင်မှုကိစ္စပဲဆိုတာအမေကပြောတယ်။ ငါစက်ဆုပ်ရွံရှာတယ်၊ ရပ်လိုက်တယ်။ နာရီအနည်းငယ်ကြာတယ်။ ငါသည်ငါ့စားပွဲအောက်၌ငါ့အတန်းထဲတွင်လုပ်နေတာစတင်ခဲ့သည်။ ငါတကယ့်ပြissueနာရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၇ နှစ်ကြာအစာရှောင်ပြီးငါစွဲနေတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများက ပို၍ ခက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်ကြည့်လိုက်သောအရာအားလုံးကိုရွံရှာမိသည်။ NoFap နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော့်ရည်းစားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုလုပ်သောလူတစ်ယောက်၏အယူအဆကိုကျွန်တော်နားလည်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာခဲ့သည်။ ထိုအခါငါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ် ဦး ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါကကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပါအပေါ်ရက်ပေါင်း 21 လုပ်! ငါသည်ဤလောက၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပိုကောင်းသလိုခံစားရတယ်။ ပိုပြီး cofidence ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါချိုးဖဲ့။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မခဲတစ်ပါတ်အဘို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလူနဲ့အတူ ၉ လနေခဲ့ရပြီးသူ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ဖို့သူ့ကိုကြွေးတင်နေခဲ့တယ်။ ငါဒီနေ့ချိုးဖောက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ငါကအသံထွက်ပြောဖို့တကယ်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ငါထွက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်သောအသက်တာရှည်သောခရီး၌ငါ့ကိုကံကောင်းပါစေ။
ကျွန်မအသက် ၂၀ အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏ပုံပြင်နှင့်အောင်မြင်သောခရီး၏အစမျှော်လင့်ပါတယ်။
12 မှာ 20 / 2016 / 4: 37 ညနေ
22F: အမျိုးသမီး porn စွဲ deniers အပေါ်ဗျာဒိတ်တော်နှင့်အမြင်သဘောထား
22F ရှိသည့်နေရာတွင်လိင်မဆက်ဆံပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်မိသောကြောင့်လူတွေကိုသူတို့ထိမိတဲ့အခါပိတ်ပစ်လေ့ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေနိုင်သည်၊ သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ၊ သူတို့ကငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်မသိကြဘူး။ ချိန်းတွေ့သည်”
ဒါပေမယ့်ငါပျင်းရိနေတဲ့ငါ့ရဲ့လက်တော့ပ် PMO မှာနာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၄ ​​ရက်ကိုသာဖြတ်သန်းရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် မှစ၍ တစ်ရက်မျှမကြုံခဲ့ရပါ။ လူများကိုဘဝတွင်မလိုအပ်သောအရာအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ အခုတော့ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုမှော်အတတ်နဲ့စချိန်းတွေ့တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါပိုကောင်းဖို့လိုတယ် ငါအဲဒီလိုဂရုစိုက်သူကိုမတွေ့ခင်တောင်ပိုကောင်းချင်တယ်။
ငါဟာအဖြစ်မှန်နဲ့သိပ်ဝေးနေပြီးငါ့ကိုထိမိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမခံနိုင်ဘူး။ ဒါအရမ်းကောင်းတယ်! ဒါ့အပြင်မိန်းကလေးတွေက nofap မရဘူးလို့ပြောတဲ့ယောက်ျားတွေကိုလည်းမင်းကိုပြောပြပါရစေ။ ကျနော်တို့ y'all ပြုသကဲ့သို့ horny ရ။ ကျနော်တို့အတူတူသွားပစ္စည်းပစ္စယရှိသည်။ ငါတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာအချိုဆုံးလူတချို့ဟာမိန်းကလေးတွေပါ။ မိန်းကလေးတစ် ဦး သည် nofap ကိုနားမလည်ပါကသူမသည်မိန်းမဖြစ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က porn ကိုယောက်ျားတွေကြည့်ဖို့မျှော်လင့်တာတစ်ခုသင်ပေးတယ် ဒါကိုကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားချင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နက်ရှိုင်းသောမိန်းကလေးများသည်သူတို့မဟုတ်သောအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများကိုစောင့်ကြည့်နေသည့်သူတို့၏ယောက်ျား / ခင်ပွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မလုံခြုံမှုများစွာရှိသည်။ သူတို့က nofap (သို့) ခင်ဗျားရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုလျှော့ချမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒါကိုပြောဖို့ဒါမှမဟုတ်ပြit'sနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ခင်ဗျားကိုပြောပြပါရစေ၊ သင် porn သည်ဘ ၀ ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည် (သင်၏ရွယ်တူချင်းများပုံမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့) သင်ထင်သလောက်ယူအက်စ်အတွက်စံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မကြီးဘူးလို့လည်းပြောထားတယ် boozers လောကတွင်မည်သူမျှအရက်မသောက်ပါ။
edit: လည်းအော်ဂဇင်ရှိခြင်းသည်ရူးသွပ်သည့်အချိန် (၂ နာရီ) ကြာသည်။ နေ့တိုင်းအချိန်များစွာဖြုန်းတီးနေသော်လည်းအနာဂတ်၌ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအိပ်နေသူများကိုလည်းသူတို့မဟုတ်ဟုခံစားစေလိုသည် လုံလောက်သော။
22F ကညာ, ဗျာဒိတ်တော်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုညစ်ညမ်းစွဲ deniers အပေါ်ထင်မြင်ချက်များ။
03 မှာ 15 / 2017 / 8: 29 ညနေ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနဲ့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ကြည့်ရုံဖြင့်အသက် ၉ နှစ်သာရှိသေးသည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကလိင်ကဘာလဲဆိုတာငါသေချာမသိဘူး။ ငါမမြင်ရရင်ငါလိင်အကြောင်းငါ့ရဲ့သဘောထားကွဲပြားမှုရှိမလာသေးဘူးလား။
နေ့တိုင်းကျောင်းမှာအပြီးငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အမြဲတစေ (တဝိုက်နှစ်နှစ်) ဤ porn sites များမှတစ်ဆင့် browsing တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မအများကြီး, နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ငါသည်ငါ့နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အခါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အပြန်ကိုစောင့်ကြည့်တတ်လာတယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ဒါကိုစကြည့်ပြီးတာနဲ့မင်းဟာမရပ်နိုင်ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ တဖန်သင်တို့ဒါကြောင့်ပူးတွဲခံစားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒါကိုမကြည့်တော့တာနဲ့သင်ကပိုကောင်းလာပြီ။ သင်၏ဘ ၀ သည်ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုနာရီပေါင်းများစွာပုံမှန်ကြည့်နေရုံမျှနှင့်မလုံလောက်ပါ။ ငါကြည့်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။ မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်ဟာစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးပိုမိုခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေတော့သည်။
ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏကြည့်ရှုခြင်းမပြုသော်လည်းတစ်နှစ်လျှင် ၅ ကြိမ်ဝန်းကျင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ငါပြောင်းလဲတာကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​နောက်ဆုံးတော့အဲဒါကိုငါ့ဘဝထဲကထာဝရဖြတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ permalink
07 မှာ 25 / 2017 / 5: 15 ညနေ
အမျိုးသမီး -3လဆင်း
ဦး ဆုံးငါအဲဒီမှာအခြားအမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်သွယ်ချင်ပါတယ် ဒါကအထီးကြီးစိုး subreddit ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟာတစ် ဦး တည်းသောအမျိုးသမီးမဟုတ်တာကိုသိရတာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့အားလုံးဟာအတူတူပဲအကြောင်းပြချက်နဲ့ဒီကိုရောက်နေတာလို့ထင်ပါတယ်။
porn သည်ငါ့အတွက်ပြanနာတစ်ခုယခုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ၂ လတာမှာအလုပ်မှထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ ၂ နှစ်တာမပြီးနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ် ငါအဲဒါကို porn အပေါ်မှီခိုမှုကြောင့်လို့ထင်နေတယ်။ ငါကြည့်နေတဲ့ငါဘယ်သူ့မှမပါဘဲ porn ကြည့်တာဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ဘူး။ ၃ လကြာပြီးသည့်တိုင်ဘာမျှမတတ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သည့်နေ့သည်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးကြမ်းတမ်းပြီးဖြစ်ပေမယ့်ငါတို့ဆက်သွယ်နေကြတယ်။
နှိမ့်ချ3လအတွင်း
11 မှာ 22 / 2017 / 4: 02 ညနေ
ငါကဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနေ့ ၁ မီတာနဲ့
ကျွန်ုပ်ဇာတ်လမ်းကအသက် ၁၃ နှစ်မတိုင်မီလေးနှစ်အလိုတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းနေခြင်းကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းကျင့်သုံးခြင်းဟာကောင်းတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိသည်။ ငါစတင်ခဲ့သည့်အခါတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်မှအနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။ ငါအသေးစားထွက်စတင်။ , မကြာခဏတစ်ကြိမ်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကြည့်ရှု။ တစ်လခန့်အကြာတွင်၎င်းသည်နေ့စဉ်အရာဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်နောက်နှစ်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအပတ်၏တစ်နေ့လျှင် PMO မျိုးစုံသို့မြင့်တက်သွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မနေ့ကအထိဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤအရာအားလုံးကိုတစ်လျှောက်လုံးကျွန်မအကြီးအကျယ်စိတ်အပြောင်းအလဲခံစားခဲ့ရသည်။ ငါမရှိသလောက်ပျော်ရွှင်, အဆက်မပြတ်စိတ်မသက်သာ, စိတ်တိုခဲ့များနှင့်တဖြည်းဖြည်းကြောင့်ဤအပြောင်းအလဲများသည်ငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုဆုံးရှုံး။ ရိုးရိုးသားသား, ငါကအားလုံးအတှကျအပျိုဖော်ဝင်အပြစ်တင်နိုင်ဆန္ဒရှိပေမယ့်ငါ schlicking အခမဲ့အချိန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဥပမာအားဖြင့်ဖြုန်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်နိုင်ဘူးလို့ခဲ့တာထို့နောက်ယခုသိကြနှင့်။
ဤအလေ့အကျင့်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်စီး။ သူတို့စီးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ဘဝဟာနောက်လာမည့် PMO အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့တစ်နေ့တာဒါမှမဟုတ်အပတ်တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါမပါဘဲငါစိတ်ပိုင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီစာရိုက်နေတဲ့လူငယ်တစ် ဦး အနေနှင့်၊
အထွတ်အထိပ် - သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျ, nadir - ငါသည်ဤ porn ကိုတဆင့်ရရှိခဲ့တူညီသောဆန္ဒပြည့်ရရှိရန်၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ kik မှတဆင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရှာဖွေသောအခါဤနွေရာသီသို့ရောက်ကြ၏။ ငါတချိန်တည်းမှာချတ်စကားအများကြီးစပြောခဲ့တယ်၊ သူတို့အားလုံးဟာကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေကိုမတ်စောက်တဲ့ကျဆင်းမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဆီကလာတဲ့တစ်ခုတည်းသောကောင်းတဲ့အရာကငါကလူ့ဆက်သွယ်မှုကိုထူထောင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီအဆက်အသွယ်တွေထဲကတစ်ခုကငါ့ကိုဒီကိုခေါ်လာတယ်။
ငါဟာပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်၊ ဘဝကိုပျော်မွေ့ချင်တယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုအဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းမှကင်းဝေးစေချင်တယ်။ ငါ reboot လုပ်နေစဉ်နှင့်အပြီးဘ ၀ သည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာသို့သွားနိုင်သည်ကိုကြည့်လိုသည်။ 🙂
12 မှာ 19 / 2017 / 1: 25 နံနက်
ဘယ်လိုအမာခံ porn မိန်းကလေးသကဲ့သို့ငါ့ကိုတက် fucked
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုတွေ့တာအရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်ကိုဘယ်လိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာ / TRIGGER သတိပေးချက်: လိင်၏ဖော်ပြချက်, porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ
ဒါကြောင့်ငါ porn ကိုမုန်း။ ဒါကိုငါအရမ်းမုန်းပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ နာရီပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ငါ ၁၂ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်၊ ပထမဆုံး porno တွေကိုစကြည့်တာနဲ့၊ ငါကြည့်ခဲ့တဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတောင်မှအနည်းဆုံးတော့ anime တွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ အဲဒီအချိန်ကအဓမ္မပြုကျင့်မှုဟာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တောင်မှနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့ပထမနှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ၊ ဒါကတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်မဟုတ်ရင်ငါထွက်ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ dopamine အလုအယက်ရနိုင်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ် အစဉ်မပြတ်အဓမ္မပြုကျင့်မှု porn ကိုရှာရန်အမြဲကြိုးစားသည်။ ငါအနည်းငယ်စဉ်းစားမိသောအခြားအရာများဖြစ်သော်လည်းငါမနှစ်သက်သောဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါက shit + piss porn, bestiality, incest and incestual မုဒိမ်းမှုနှင့် bucku no pico (anime pedophilia) ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းတာကငါကြည့်ခဲ့တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအများစုဟာ anime တွေဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတကယ်လူတွေကိုနာကျင်အောင်လုပ်တာကိုမကြည့်ခဲ့ဘူး (တကယ်လို့သာတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါနှိုးဆွနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး) ။ သို့သော် bestiality အစစ်အမှန်ကလူဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းမိတ်လိုက်တိရစ္ဆာန်များ၏ vids မှချွတ်ရတဲ့တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံရှာမိသည်။ သူမကြည့်လိုက်သောအရာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထွက်ခွာခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ငါအရင်ကဖြစ်ခဲ့တာလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ငါသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနောက်တဖန်မကြည့်တော့။ သို့သော်နှစ်ပေါင်းများစွာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအပျော်စီးစီးနင်းမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်ထိခိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အဆုံးမသတ်နိုင်ပါ ကျွန်ုပ်၏အတိတ်ကလိင်သမိုင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားနိုင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းသောမိန်းမများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမှသည်ကျွန်ုပ်သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအားအဓမ္မပြုကျင့်မှုအားလုံးနှင့်ယုတ်ညံ့။ တန်ဖိုးမဲ့သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်စာသားအတိုင်းအတာဖြင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ငါပြောနိုင်တာကတော့သူတို့ဟာတစ်ပတ်အတွင်းအာရုံစိုက်မှုမရှိတဲ့ bestiality, zoophilia နဲ့ anime pedophilia + scat တွေကိုတွေ့ခဲ့တာပါ။ (သူတို့ကိုမကြာခင်သူတို့ကိုငါရွံမုန်းတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား)၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကငါနဲ့အတူရှိနေ ။ ငါ porn ဖြတ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ, ငါသူတို့ကိုငါနှင်ထုတ်ချင်တယ်ရင်တောင်မုဒိမ်းမှုမြင်ကွင်းများအမြဲငါ့ခေါင်းကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်ကြားရသော်ကျွန်ုပ်သည်ဒေါသ၊ ရွံရှာဖွယ်နှင့်သားကောင်အတွက် ၀ မ်းနည်းမိသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ဆိုးရွားလှသည့်နှိုးဆွမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်ရွံရှာ။ အလိုလိုက်သွားသည်။
မုန်းတီးတဲ့အမုန်းတရားကိုငါမုန်းတယ်၊ ငါသူ့ကိုကြည့်ရတာမုန်းတယ်၊ ပြီးတော့အရမ်းဆိုးတာကိုငါမုန်းတယ်။ ကျွန်တော့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေကအဲဒါကိုကြည့်တာကိုမုန်းတယ်။ သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာလုံခြုံမှုမရှိဘူး။ ငါဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ကြည့်ရတာပျော်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆပ်ကပ်ပြပွဲကိုရောက်နေပြီဆိုတာသိပြီးအမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေနဲ့တည်ရှိနေခြင်းကိုမခံစားရဘူး။ porno မြင်ကွင်းတစ်ခု (မင်းကြည့်နေတဲ့ Netflix) မပါဘဲတီဗီရှိုးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မကြည့်နိုင်ပုံကိုကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်။ ငါလွတ်မြောက်လို့မရဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ ငါ့ ဦး နှောက်တောင်မှငါ့ခေါင်းထဲကအဲဒီမြင်ကွင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ငါ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်၊ ၄ နှစ်လောက်ကငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုရပ်တန့်ခဲ့ပေမဲ့၊ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တိုင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသတိရလာကာ၎င်းကိုကြည့်ရှုနေသကဲ့သို့ဆိုးလိုက်သည်။ ဒါပေမဲ့အခုငါပြီးပြီ။ ငါဒါကိုငြီးငွေ့နေတယ်။ လိင်သည်ချစ်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းဖြစ်သင့်သည်၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ မုဒိမ်းမှု၊
ဒါမဖြစ်သင့်ဘူး ငါ 12 နှစ်အရွယ် fuck ဆိုတဲ့မှာ fuck ဆိုတဲ့အပြည့်အဝအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူကြီးများကြည့်ဖို့ access ကိုရှိသည်မဟုတ်သင့်ပါတယ်။ ငါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျိုးပဲ့နေတယ်၊ ​​တခါတလေငါလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ၊ ငါနင့်ကိုနမ်းရှုံ့ဖို့၊ အသုံးမကျဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်နစ်မြုပ်နေတုန်းပဲ။
သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့အဖော်ကိုငါစိတ်ကူးနိုင်ထက်ပိုချစ်ကြတယ်။ ငါနှင့်စကားပြောပြီးနောက်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ငါနေဆဲသူနှင့်အတူပိုမိုစူးစမ်းဖို့လုံလောက်တဲ့ငါ့အစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို drop မထင်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာရှေ့ပြေးနိမိတ်ကိုငြင်းပယ်သည်။ ပြီးတော့ငါတော်တော်များများကငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့သမိုင်းကြောင်း၊ အထူးသဖြင့်ငါအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြလို့ပါ။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမယုံသင်္ကာကင်းမဲ့နေလို့ပါ၊ အဲဒါကိုအခြားဝတ်လစ်စလစ်အမျိုးသမီး ၁၀၀ နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး၊ သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစဉ်အမျိုးသမီး ၁၀၀ ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်မအသက် ၁၂ နှစ်ကတည်းကပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ဖို့အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကိုငါစိတ်ကူးယဉ်နေတုန်းပဲ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုအခုမှစပစ်တော့မယ် အဲဒီစွမ်းအားကြီးတဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးမှထွက်ခွာသွားတာကိုမခံစားချင်တာပါ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ရင်းနှီးမှုအတွက်သိမ်းဆည်းထားလိုပြီး၊ နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သောပျက်စီးမှုများအားလုံးကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Edit: wow ယောက်ျားတွေ၊ ငါမကြာခင်လူတိုင်းကိုတုန့်ပြန်လိမ့်မယ်။ သင်၏အတွေးများနှင့်တုံ့ပြန်မှုအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထိုအအမှတ်အသားမမှတ်ခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါ။ အခုမှတ်သားလိုက်ပြီ။
03 မှာ 13 / 2018 / 4: 53 ညနေ
စွဲအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ရှုထောင့်ကနေစွဲпор
ကိုယ့်ကိုငါ့ရက်ပေါင်း 90 Streak အပေါ်ပြန်လာ။ ငါစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခံစားရတယ် စာသားပဲ tab ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော့်အပေါ်အကြီးအကျယ်နောင်တရတယ်၊ ရှက်ပြီးအပြစ်ရှိတယ်။ ဒါကိုငါဘယ်တော့မှမဆောက်ခဲ့ဘူး အမြဲတမ်း
ငါ ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ၁၂ နှစ်အကြာမှာငါရှိနေတယ်။ အဲဒါမှားတယ်လို့ငါအမြဲသိတယ်၊ ဒါဟာစွဲလမ်းမှုပါ ၎င်းသည်မိသားစုများ၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ ဆက်ဆံရေးများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုဖျက်ဆီးသည်။ ငါကမူးယစ်ဆေးစွဲကဲ့သို့အလေးအနက်ထားယူကြဖို့အလိုရှိ၏။ အချို့နည်းလမ်းများတွင်၎င်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည့်အချိန်တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖုန်းကိုကျောအိတ်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီးအချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအများအားဖြင့်တော့ဘာမှမကုန်ကျပါဘူး။
ငါသည်လည်း porn စွဲအမျိုးသမီးများအကြားအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်အလိုရှိ၏။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံဤမျှအထီးကျန်နေသည်။ မင်းရဲ့အများစုဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ မင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုပါကြိုးစားပြီးကြိုးစားလုပ်ဆောင်တာဟာအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ တနင်္ဂနွေကျောင်းမှာမိန်းကလေးတွေကိုဒီချောစောင်းကယောက်ျားလေးတွေပဲလို့ဘယ်တော့မှမရှင်းပြဘူး။ အဲဒါကိုလူတိုင်းကပြောဖို့လိုတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပြုခဲ့သောအမှုကိုငါကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားရတယ်။ ငါကိုယ်တိုင်ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မတင်ဘူး ငါထွက်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကအေးခဲသွားပြီ၊ ဖုန်းမြည်တယ်။ ဒီဆိုင်းဘုတ်အားလုံးကငါ့ကိုမလုပ်ဖို့ပြောနေတာငါသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံရှာတယ်
ငါပြီးသွားတဲ့အခါလူတွေပြောတာကိုကြည့်ဖို့ဗွီဒီယိုရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော် scroll လုပ်လိုက်တယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာအမျိုးသမီးကိုကန့်ကွက်တဲ့အဘိုးအိုဟောင်းတွေ။ ဒါဟာငါ့ကိုထွက် creeped ။ ဒါပေမယ့်ဒါကညစ်ညမ်းမှုပါ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကိုကန့်ကွက်ပါတယ်။
အချို့ကငြင်းခုံပြောဆိုကြပြီးဤသို့ပြုသူအမျိုးသမီးများသည်သဘောတူလက်ခံကြပြီး၎င်းသည်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသောလူတစ် ဦး ကိုယူရမည်။ ငါမတိုင်မီကြောင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့အတွက် dabbled ကြောင့်အသက်တာ၌ငါ့အကြီးမားဆုံးနောင်တဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကအရမ်းနည်းခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုဘယ်လိုရှုပ်ထွေးစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုအသိအမှတ်ပြုမှာကိုဒီနေ့ငါကြောက်နေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအဲဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဖျက်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ဟာအရာရာတိုင်းကိုအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ ငါနေဆဲအကြောင်းအိပ်မက်ဆိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အမည်ဝှက်စွာနေထိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏အမည်ရင်းကိုအကောင့်များကဲ့သို့သောအရာများကိုဘယ်တော့မှမထည့်ပါ။
အထူးသဖြင့်အမျိုးသားစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုငါးမိလိမ့်မယ်လို့ငါစိုးရိမ်တယ်။ ငါကြောက်လန့်တိုင်း၌နထေို။ တစ်ယောက်တည်း နေ့ ငါ့အတိတ်အကြောင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘူး။ ငါကစာရိုက်ရုံကမောက်ကမပါပဲ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူများသည်၎င်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သေချာတာပေါ့၊ သူတို့ကဒါကိုသဘောတူနိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အခု ၅ နှစ်၊ ၁၀၊ ၁၅ နှစ်လောက်ကော။ တရားဝင်မဟုတ်သောကောလိပ်ကျောင်းသူမိန်းကလေးများ၏ဤဗီဒီယိုများသည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုချိုးဖဲ့သည်။ သူတို့နောင်တရတော့မှာပါ။ မည်သည့်အသက်အရွယ်ကြောင့်နောင်တရလိမ့်မယ်။
ငါအခုပဲတိတ်ဆိတ်နေတယ် ငါနှစ်ပေါင်းများစွာဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကိုင်ထားခဲ့ကြရတယ်။ subreddit နှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အားပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါအရမ်းချိုလို့လှတယ်ထင်တယ် တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုများကိုမှန်ကန်သောခိုင်မာသောစွဲလမ်းမှုအဖြစ်ရှုမြင်မည်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲမျိုးဆက်မှအဖြစ်အပျက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တားဆီးနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
12 မှာ 27 / 2018 / 8: 28 နံနက်
ဒီမှာမိန်းကလေး! ပထမ ဦး ဆုံး post …ဒီပြproblemနာကိုနောက်ထပ်အန္တရာယ်မဖြစ်စေခင်ရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားနေသည်။
ဒီတော့ဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာပါ။ တစ် ဦး က 33 နှစ်အရွယ်ဖြောင့်တစ်ကိုယ်ရေမိန်းမ။ ငါ့ဘဝအတူတူရှိနေပြီ သို့သော်လည်းငါသည်မကြာသေးမီကငါအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုငါထင်သောအရာမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်
ငါ porn ကြည့်တယ် နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်အများစုသောနေ့ရက်များ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကြိမ်အနည်းငယ်။ ငါပျင်းသောအခါ, ကစောင့်ကြည့်, အိပ်မရဘူး, horny ရဲ့ငရဲအဘို့။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏သံသရာနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီသည် (ပို၍ ချိုပြီး ပို၍ ညစ်ညမ်းပေသည်) ။ ဒါဟာငါမပါဘဲအော်ဂဇင်မရဘူးသောအချက်ကိုမှရတယ်။
ဒီနှစ်မှာငါဟာချိတ်ဆက်မှုတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒါတွေကိုငါမပြီးနိူင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုငါဟာပြီးခဲ့တဲ့စုံတွဲလတွေအကြာမှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုမကြာခဏတွေ့နေရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်မှုအနည်းဆုံး ၁၅ ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်ကိုမရရှိခဲ့ပါ။ သူကအိပ်ရာထဲမှာချောနေတယ်။ ကျနော်တို့ lube ကိုသုံးပါအပိုဆောင်းဆွကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဗြ။ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးပြီ ငါတစ်နှစ်ကျော်လိင်ကနေအော်ဂဇင်မရခဲ့ဘူး။ အဲဒါစိတ်ဆင်းရဲစရာပဲ။ သူကကျွန်တော့်အိမ်ကိုလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ထွက်ခွာသွားသည့်အခါကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းလှပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တောင် ငါတစ်ခါတလေမှာ porn မှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းအားဖြင့် (လိင် (သို့) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်) တောင်အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်မိသေးတယ်။ ဒါပုံမှန်လား။
Porn ကကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေဖန်တီးခဲ့တယ်၊ လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းသည်မှားသည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ပါ။ ငါတကယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့ရန်မလိုချင်ကြဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်မကိုဘယ်တော့မှမလှည့်စားဘူး (ဆွဲဆောင်မှုကိုသတိပြုမိပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမဖွင့်ဘူး) သို့သော်လည်းငါသည်လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းအပေါ်ဘာမှထက်ပိုပြီးရ။ အဲဒါဟာကျွန်တော့်ကိုလုံးလုံးလန်းဆန်းစေပါတယ် အခြားအမျိုးသမီးများဤကဲ့သို့သောကြုံတွေ့ဖူးသလား ငါသည်လည်းလိင်တူချစ်သူ MM သို့မဟုတ် MMF porn ကိုကြည့်ရှုရန်ဘယ်တော့မှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းတွင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုမိလာသည်။ အနည်းဆုံးတော့ငါ့အတွက်တော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရိပ်တစ်ခုထဲကိုရောက်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ဒီအခမဲ့အခမဲ့ခရီးစဉ်ကိုငါစလိုက်ပါပြီ။ နှစ်ရက်ရှိပါပြီ ငါဟာပြင်းထန်တယ်လို့ငါမထင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမထိခိုက်စေဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့လူဘဝကိုလူ့လိင်အပေါ်သက်ရောက်စပြုလာပြီဆိုရင်အခုအချိန်မှာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ကောင်းပါပဲ။
12 မှာ 27 / 2018 / 9: 33 နံနက်
ဤနေရာတွင်အမျိုးသမီး, အလားတူအတွေ့အကြုံကို။ ငါအအေးကြက်ဆင်နုတ်ထွက်။ ဒါဟာသင်ကမပါဘဲလအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်ကသေချာပေမယ့်လုံးဝတန်ဖိုးရှိဖြစ်မည်ဟု, ညှိနှိုင်းမှုကာလပါပဲ။ လိင် သာ. ကောင်း၏။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ သာ. ကောင်း၏။ အဆိုပါ tab ကိုထွက်ပိတ်ပြီးမရှိ slimy, အပြစ်ရှိခံစားချက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာလည်းနောက်မှပိုကောင်းခံစားရပါတယ်။
ငါ shit မှာနောက်ကျောကိုကြည့်သောအခါအကြှနျုပျအဘို့ငါလိုပဲအတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြု - wtf, အဘယ်ကြောင့် ???
07 မှာ 06 / 2020 / 11: 30 နံနက်
ဟေးလူတိုင်း! ငါကဒီအသိုင်းအဝိုင်းမှာအချိန်အတော်ကြာဝိုင်းရံနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ မင်းရဲ့ပုံပြင်တွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းဖတ်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပံ့ပိုးမှုပေးတာကိုလည်းငါအရမ်းကြိုက်တယ်။
ငါကလူမဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအသိုင်းအဝိုင်းမှာစကားပြောဖို့ငါတကယ်ရှက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၃ နှစ်ရှိအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကတည်းကရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်လူတွေအများကြီး၊ ငါနင့်ကိုများစွာသောလူလိုပဲဆိုးရွားတယ်လို့မထင်မှတ်ပဲခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါသည်လည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်။ လက်တွေ့မကျသည့်စိတ်ကူးရှိသည်။ PMO ကိုစွဲလမ်းနေခြင်းကကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုတစ်ခါတစ်ရံထင်စေခဲ့သည်။
PMO မွာရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အနည်းငယ်ရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော် ၀ မ်းသာမိပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ဆယ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်အသုံးချသည့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဤလျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျွန်မခင်ပွန်းအားဝေမျှခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းဤအသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းသူ့ကိုပြောပြသည်။ အံ့သြစရာကသူဟာစူပါထောက်ကူပေးသူဖြစ်တယ်။ ငါဟာဒီအသိုင်းအဝိုင်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းဟာထူးဆန်းနေသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော့်ကိုဒီမှာပထမနေရာတင်ဖို့အားပေးတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆက်စပ်မှုနိုင်သူခြောငျးအခြားအမျိုးသမီးများရှိပါသလဲ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မခင်ပွန်းနှင့်စကားပြောပြီးနောက်, ငါတို့နှစ် ဦး စလုံး PM-mode ကိုအတူတူကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်! ငါတို့ယုံကြည်သည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုချိတ်ဆက်နိုင်အောင်ကူညီနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကုသနိုင်သည်။ ငါပြီးခဲ့သည့်တစ်လလုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟုခံစားရပြီးဖြစ်သည်။
ဒီအသိုင်းအဝိုင်းတည်ရှိတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ် ဒါဟာငါ့ကိုအများကြီးနည်းလမ်းများစွာအတွက်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ဒါကအခုအချိန်မှာအားလုံးပါပဲ လူတိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။